အသစ် - သွေးဆောင်နှိုးဆော်သံ cued ဂန္ထဝင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောအေးစက်များအတွက်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်: အရံ adrenergic နှင့် brainstem glutamatergic စနစ်များအကြားအပြန်အလှန် (2009) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
Comments: ကလတ်တလောတစ်ခုဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကဒီလေ့လာမှုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါယူ-ကွာအသစ်အဆန်းကွောကျမကျကိုထုတ်လုပ်နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုအားကောင်းအမှတ်တရများနှင့်သင်ယူမှုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာသိပ္ပံပညာရဲ့အထွေထွေဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမည်သည့်အရာမဆို epinephrine (adrenaline) နှင့် norepinephrine (noradrenaline) ကိုမြှင့်တင်ပြီးမှတ်ဥာဏ်အသစ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အသစ် (dopamine) နှင့်“ ကြောက်ရွံ့ခြင်း” တို့ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုဟာအလွန်တရာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အမျိုးအစားများသို့ကူးပြောင်းမှုနောက်ကွယ်မှဖြစ်သည်။
Stanley O. မင်းကြီးသည် II နှင့် Cedric အယ်လ် Williams က
ဝတ္ထုအခင်းအကျင်းမှထိတွေ့မှုမှတ်ဉာဏ်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ arousal ၏မြင့်ပြည်နယ်နှင့်ဦးနှောက်အတွက်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်။ သို့သော်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောအခင်းအကျင်းများနှင့်ရိုးရှင်းသောထိတွေ့မှုကိုခွင့်ပြုပေးသောဖြစ်စဉ်များသည်စာနာမှုအားဖြင့်ရလဒ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်နားလည်မှုနည်းပါးသည်။ ဤသည်အားနည်းချက်ကိုအရံနှင့် / သို့မဟုတ်ဗဟိုနှိုးဆော်ခြင်းအတွက်အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ Pavlovian ကြောက်ရွံ့အေးစက်များအတွက်မှတ်ဉာဏ် modulates ဘယ်လိုဆန်းစစ်နေဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ကြွက်များအား ၅ မိနစ်ခန့်အေးစက်ထားသည့်အခန်းသို့ထိတွေ့စေခြင်းသို့မဟုတ် ၂၅ နာရီထိထိတွေ့မှုမပြုခြင်း၊ retention တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားအခြေအနေတွင်5နာရီအကြာတွင်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကြိုတင်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ကြိုတင်ထိတွေ့ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များ (P <24) ထက် ပိုမို၍ အေးခဲလှသောလှုံ့ဆော်မှု (CS) တင်ဆက်မှုများ၌ပြသခဲ့သည်။ အသစ်အဆန်းဖြင့်ထုတ်လုပ် retention ကိုအတွက်တိုးတက်မှု sotalol (0.35 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip) နဲ့အရံβ-adrenergic receptors တစ်ပိတ်ဆို့လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် attenuated ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု 48 အရရံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ output ကိုအတွက်အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်တိုးနျူကလိယ tractus solitarius (NTS) တွင် brainstem အာရုံခံအပေါ်သို့ synapses visceral afferents အားဖြင့် ဦး နှောက်မှကူးစက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ CNQX (0.05 μg) ဖြင့် NTS တွင် AMPA receptor လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိသောတိရိစ္ဆာန်များ (P <6) တွင်ခဲများခဲခြင်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု (၃) တွင်တိရိစ္ဆာန်များမှ epinephrine အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်နှိုးဆွမှုမှထုတ်လုပ်သောစက်ကိရိယာများမှတဆင့်သင်ယူခြင်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ epinephrine (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ပေးသောကြိုတင်ဖော်ထုတ်ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များသည်ဆားထိန်းချုပ်မှုများ (P <2) ထက်များစွာပိုမိုအေးခဲသွားပြီး CNQX ၏ Intra-NTS ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal သို့မဟုတ် Pre-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် epinephrine နှင့်အတူစာနာလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်သည့်အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့အစပျိုးနှင့်မရေ / NTS ရှုပ်ထွေးနေတဆင့်ဗဟိုမှတဆင့်ကူးစက်သော adrenergic ယန္တရားများမှတဆင့်မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်း။ သရုပ်ပြ
တွေ့ရှိချက်တစ်ခုထွန်းသစ်အရေအတွက်ကိုမသိရအခင်းအကျင်းသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများကျွမ်းတဝင်မရှိသော Array ကိုထိတွေ့နဲ့ဆက်စပ်အသစ်အဆန်းမှတ်ဉာဏ်သို့အသစ်သောဖြစ်ရပ်များ၏ attribute တွေကုဒ်သွင်းထဲမှာသပ္ပါယ်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးဆယ်လူလာနှင့်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုစတင်ကြောင်း။ ထုတ်ဖေါ် မှတ်ဉာဏ်နှင့် Synaptic plasticity အခြေခံတက်-စညျးမဉျြးဥပဖြစ်စဉ်များအဖြစ်အစောပိုင်း3wk postnatal (Tang နှင့် Reeb 2004) အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အသက် 22 mo ကျော်လွန်စမ်းသပ်ပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများကြွက်များတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်အတွက်အသစ်အဆန်းထိတွေ့မှု၏သပ္ပါယ်တန်ဖိုး (Sierra-mercado et al ။ 2008) ။ အသစ်ကကိုယ်စားပြုခိုင်မာအောင်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လိုအပ်သောထဲကဓာတုပစ်စညျးပြောင်းလဲမှုများအဆငျ့ဆငျ့ကိုအစပျိုးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်မှအစိတ်အပိုင်းအတွက် related နိုင်ပါသည်။
သင်ယူမှုကိုအောက်ပါအသစ်များကိုအသင်းအဖွဲ့များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးစုပေါင်းမှတ်ဥာဏ်သဲလွန်စ (Alberini 2009) သို့အသစ်သောဖြစ်ရပ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများကိုခညျြနှောငျမှပရိုတိန်း (CREB) နှင့်နောက်ဆက်တွဲ CRE-mediated ဗီဇစကားရပ် binding စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်၏တိုးလာ phosphorylation နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ CREB phosphorylation တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်နေရာချထားပြီးနောက် hippocampus အတွင်းတက်-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဖြစ်တယ်, မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး၌ဤအရေးကြီးသောခြေလှမ်းတ္ထုအတွေ့အကြုံကိုအောက်ပါတစ်နာရီထက်ကျော်လွန်ဆက်ရှိနေသေးပေမယ့်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အခြေအနေတွင် (Kinney နှင့် Routtenberg 1993 ထိတွေ့ဘာသာရပ်များအတွက်မပြောင်းလဲဖြစ်နေဆဲ; Viola et al ။ 2000; ။ Izquierdo et al 2001) ။ တစ်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်မှတိရိစ္ဆာန်များကိုဖော်ထုတ်သည့် amygdala နှင့် hippocampus အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇက c-fos နှင့်က c-jun ပိုမိုအဆင့်ဆင့် induces ပေမယ့်ဒီအပြောင်းအလဲမှပြန်လည်ထိတွေ့ပေါ်လွင်လာသည်ဟုအုပ်စုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ, သို့မဟုတ်ခွင့်မရှိကြ, တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အခြေအနေတွင် (Papa စူးစမ်း ။ et al 1993; ။ Zhu et al 1997; ။ Sheth et al 2008) ။ arousal နဲ့စေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်စဉ်များအပေါ်အသစ်အဆန်းထိတွေ့မှု၏အကျဉ်းဖြစ်စဉ်များများ၏တည်မြဲဆိုးကျိုးများလည်းဝေးလံခေါင်သီမှတ်ဉာဏ်များအတွက်ပြန်လည်ရယူခြင်းမြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောများမှာ (Izquierdo et al ။ 2000, 2003) နှင့်သာမန်အားဖြင့်ဆင်းရဲသားကို retention ကို performance ကိုလိုက်လျောကြောင်းအပျော့စားလေ့ကျင့်ရေးအခြေအနေများအောက်တွင်မှတ်ဉာဏ်အားကောင်းလာစေရန်။ Moncada နှင့် Viola (2007) 24 ဇအကြာတွင်စမ်းသပ်ပြီးထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသို့မဟုတ်လုံးဝမမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ suboptimal footshock ရလဒ်များကိုနဲ့ inhibitory ရှောင်ရှားလေ့ကျင့်ရေးပြခဲ့တယ်။ သို့သော်ဘာသာရပ်များမှတ်ဉာဏ် 24 ဇအကြာတွင်အကဲဖြတ်သောအခါအားနည်း footshock နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးထိန်းချုပ်မှုမှသိသိသာသာပိုကောင်း retention ကိုဆွေမျိုးပြချက်ချင်းနောက်မှာကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခြေအနေတွင်ကြိုတင်ရန်သို့မဟုတ်ပင်ဖြစ်စေထိတွေ့။
တစ်ဦးအားနည်းထိရောက်မှု tetanization နှင့်အတူကြိုတင်ရေရှည်အလားအလာ (LTP) ၏သော induction တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်နေရာချထားက de Novo ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်သောနှောင်းပိုင်းတွင် LTP စောစော LTP ၏တိုးတက်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်ရှာဖွေရေး၏ဤပုံစံတစ်ခုကာလအတွက် LTP ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရှည် 8 ထံမှ 24 ဇအထိ (Li က et al 2003; ။ ။ Straube et al 2003a, ခ) ။ LTP ကြာရှည်လေ့၏အကျိုးဆက်အဖြစ်အကျွမ်းတဝင်ပြန်ဆိုလေ့ကျင့်ရေးအခင်းအကျင်းအတွက်အစပျိုးလျှင်ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခြေအနေတွင်ကြိုတင်နေရာချထားဖို့ propranolol ၏ intracerebroventricular ပြုတ်ရည်နှင့်အတူ noradrenergic receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဦးနှောက်အတွင်းအသစ်အဆန်းသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက် norepinephrine တစ်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, LTP ၏အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ကာကွယ်ပေးသည် (Straube et al ။ 2003a) ။ ဒီ neurotransmitter တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလည်း locus coeruleus (LC) norepinephrine ထောက်ပံ့ကြောင်းအာရုံခံ forebrain မှဖေါ်ပြခြင်းတွေ့ရှိချက်များကအကြံပြုနှင့် limbic အဆောက်အဦများတဲ့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကနဦးထိတွေ့မှုအပျေါမှာလှုပ်ရှားမှု phasic ပြီးတော့ Activision နေတာကိုပြသပေမယ့်တိုးလာဥတုကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်မှပြန်လာသော စကားစပ် (Vankov et al ။ 1995) ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex နဲ့ hypothalamus အတွက် norepinephrine ပြင်းအားသိသိသာသာတစ်ဝတ္ထု illuminated ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောကြွက််လေ့ကျင့်ရေးအခြေအနေတွင်ထိတွေ့မှုကအောက်ပါတိုးမြှင်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့သည်အခြားတွေ့ရှိချက်များ, (McQuade et al ။ 1999), norepinephrine တုံ့ပြန်အလယ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲများကို mediates ပိုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားပေး အသစ်အဆန်းထိတွေ့မှု။ ဤရွေ့ကားစုပေါင်းတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခြေအနေတွင်မှသိမ်မွေ့ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အသစ်အဆန်းရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့ထိရောက်စွာ encoded ခံရဖို့အသစ်အတှေ့အကွုံမြားအဘို့အရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်ကြောင်း neurochemical နှင့် Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုများစွာသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ကျွမ်းတဝင်မရှိသောပတ်ဝန်းကျင်မှာမှအကျဉ်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များကိုဦးနှောက်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေတွင်း-မှတ်တမ်းတင်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများကန့်သတ်မထားပါ။ အသားအရေအကျင့်, နှလုံး output ကို, နှင့် adrenal ဟော်မုန်း corticosterone နှင့် epinephrine ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပြင်းအားအပါအဝင်စာနာလှုပ်ရှားမှု၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရညွှန်းကိန်း, အားလုံးဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောပတ်ဝန်းကျင် (de Boer et al အတွက်အခမဲ့တူးဖော်ရေးခွင့်ပြုပြီးနောက်လူသားမြားသညျသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များတင်ပြခြင်းဖြင့်ခြီးမွှောကျနေကြသည်။ 1990; Bradley et al 1993; ။ Handa et al 1994; ။ ။ Gerra et al 1996; ။ Codispoti et al 2006) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ရပ်များနှိုးဆွသောအားဖြင့်ရူးနှမ်းသူတို့၏အမျိုးအတိုက်ရိုက်ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာကြောင်းဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုအတန်းအကြားအရေးကြီးသောမျဉ်းပြိုင်ထုတ်ဖေါ်။ နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများမှတ်ဉာဏ်သို့အသစ်သောဖြစ်ရပ်များဝှက်ဖို့အရံ visceral လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဦးနှောက် limbic output ကို modulate ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းသော်လည်း, အရာအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ရံနှင့် / သို့မဟုတ် Central arousal အားဖြင့်ယန္တရားမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးလုံးဝနားမလည်သည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများအတွက် arousal-related ဟော်မုန်း epinephrine နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖြည့်စွတ်အခန်းကဏ္ဍကစားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပြုလုပ်ဆေးများတစ်အကွာအဝေးအတွင်း epinephrine ၏ဥပမာအားဖြင့်, စနစ်တကျဆေးထိုး (ဝီလျံနှင့် McGaugh 1993; Clayton နှင့်ဝီလျံ 2000; Nordby et al 2006; ။ ။ Dornelles et al 2007) ဝတ္ထုအခင်းအကျင်း (Vankov ထိတွေ့အောက်ပါဥတု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်ကိုပြသကြောင်း noradrenergic LC အာရုံခံ (Holdefer နှင့်ဂျင်ဆင် 1987) ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုတိုးပွားစေ et al ။ 1995) ။ အသစ်အဆန်းတွေနဲ့အမျှ epinephrine အုပ်ချုပ်ရေး LTP (Korol နှင့်ရွှေ 2008) နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ (Frankland et al ။ 2004) နှောင့်အယှက်ကတော့ကူးယူအချက် CREB နှင့်အတူကြွက်တွေအားဖြင့်ပြသ Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက် retention ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုနောက်ကြောင်းပြန်။ လူသားဝတ္ထုအမြင်အာရုံဆလိုက်၏တင်ဆက်မှု (Fenker et al ။ 2008) မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့် adrenals (Gerra et al ။ 1996) မှ epinephrine လျှို့ဝှက်ချက်များကိုစတင်များနှင့် arousal ၌ဤပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်းမှာ retention ကိုစွမ်းဆောင်ရည် (Cahill et al ။ 1994) တိုးတက်စေရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည် ဒီဟော်မုန်း (Cahill နှင့် Alkire 2003) ၏တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုမှထုတ်လုပ်ကြောင်းမှနှိုင်းယှဉ်။ ဝတ္ထုအမြင်အာရုံဆလိုက် (ထူးဆန်းနှင့် Dolan 2004) နဲ့လူ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ arousal-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် LTP ၏အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ပံ့ပိုးအထက်တွင်ဆွေးနွေးကြသည် (Li က et al 2003; ။ ။ Straube et al 2003a, ခ) နှစ်ဦးစလုံး noradrenergic အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် attenuated နေကြတယ် အဆိုပါβ-adrenergic အဲဒီ receptor ရန် propranolol နှင့်အတူဂီယာ။ တွေ့ရှိချက်ဒီပုံစံအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်များကိုမှတ်ဉာဏ်သို့အသစ်အတှေ့အကွုံမြား၏ encoding ကအင်္ဂါရပ်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုသောနောက်ဆက်တွဲဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကိုဦးနှောက်ထဲမှာ noradrenergic လှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအရံဟော်မုန်းစနစ်များပါဝင်သော interaction ကမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။
အသစ်အဆန်းထိတွေ့မှု၏အကျဉ်းကာလကဒီယန္တရားမှတဆင့် arousal သွေးဆောင်လျှင်, သူကတဦးတည်းစိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များမှတ်ဉာဏ်သို့သိမ်းထားသည့်ခွန်အားဦးနှောက်ဖို့အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ကမကထပြုခဲ့ epinephrine ၏ sympathomimetic လုပ်ရပ်များ transmit ကြောင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ဖွငျ့ဖွစျသညျ arousal သက်ရောက်မှုသောဆိုလိုတယ်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် အဆိုပါ CNS အတွက် norepinephrine output ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းစနစ်များကို။ အဆိုပါမရေ၏ Peripheral အကိုင်းအခက်တို့သည်မရေ၏တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုအမျှင်ထူထပ် epinephrine (။ ။ Schreurs et al 1986; Lawrence et al 1995) ခညျြနှောငျကြောင်းβ-adrenergic receptors နှင့်အတူ embedded နေကြသည်အဖြစ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍဝတ်ပြုနှင့်မရေ innervate ၏အရံနောက်ဆုံးတွင် နှလုံး, အသည်း, အစာအိမ်နှင့်အဆုတ်အပါအဝင် epinephrine လွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်းထုတ်လုပ်စာနာ arousal ဖို့အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းအာရုံခံအင်္ဂါများ, (Shapiro နှင့် Miselis 1985; ။ Coupland et al 1989; Paton 1998a, ခ) ။ ထိုမှတပါး, vagal အမျှင်တက်၏လျှပ်စစ်ဆွ LC အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်သိသိသာသာပေါကျကှဲထုတ်လုပ်ရန် (Grove et al 2005; ။ Dorr နှင့် Debonnel 2006) နှင့် amygdala (Hassert et al 2004 ။ ) နှင့် hippocampus ထံမှကောက်ယူ norepinephrine ပြင်းအားအတွက်ကြာရှည်မြင့်တက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ (Miyashita နှင့်ဝီလျံ 2002) ။
အရံအာရုံခံအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအတွက်မြင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များတိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု (NTS) (။ Sumal et al 1982 Kalia နှင့် Sullivan က 1983) ၏နျူကလိယအဖြစ်လူသိများသည့် brainstem အတွက်ဆဲလ်တစ်တိကျတဲ့စပျစ်သီးပြွတ်မှ vagal အမျှင်တက်နေဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုများတုံ့ပြန်ခုနှစ်, NTS အာရုံခံ (ဗန် Bockstaele et al ။ 1999) LC အာရုံခံအပေါ်တိုက်ရိုက် synapses မှတဆင့်ဗဟို noradrenergic လှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုး (1995 ။ Vankov et al) ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများ၏ရှေ့မှောက်၌တက်ကြွစွာဖြစ်လာပေမယ့်လည်းထဲမှာ norepinephrine လွှတ်ပေးရန် modulate မသာကြောင်း ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex, hippocampus နှင့် amygdala medial အဖြစ်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့အသစ်အတှေ့အကွုံမြားကုဒ်သွင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ play ကြောင့်အဆောက်အဦများ (ရီကာဒိုနှင့် Koh သည် 1978; Loughlin et al 1986; ။ Florin-Lechner et al 1996 ။ ) ။
အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal epinephrine လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးပွါးလျှင်, သူကတဦးတည်းစိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်များရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့သိမ်းဆည်းထားသည့်အတွက်ခွန်အားဒီ vagal / NTS လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ဖွငျ့ဖွစျသညျသက်ရောက်မှု arousal သောဆိုလိုတယ်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကြိုတင်သင်ယူမှုမှဇီဝကမ္မ arousal တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဝန်ကိုထမ်းရွက်အမှတ်တရများ၏သိုလှောင်မှုရံ adrenergic activation လွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ကိုင်တွယ်အဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးအခြေအနေတွင်၏ "အသစ်အဆန်း" နှိုင်းယှဉ်သည် "ကျွမ်း" ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီအယူအဆစမ်းသပ်။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းဇီဝကမ္မ arousal ကြိုးကိုင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကျယ်ပြန့်စူးစမ်းရသေးပေမယ့် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မကြာခဏ, စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုနှိုးဆွသောအဘို့အမှတ်တရများဖွဲ့စည်းပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြောဆားကစ် (ကင်မ်နှင့် Jung 2006) ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အသုံးပြုသည်။
ဒီချို့ယွင်းချက်ပေးထားသောဤလေ့လာမှုများအရံဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အဘို့မှတ်ဉာဏ်သြဇာလွှမ်းမိုးရာအားဖြင့်ယန္တယားကိုဖျောပွဖို့မရေ / NTS ရှုပ်ထွေးနေဖြင့်မှတဆင့်ကူးစက်သောဘယ်လိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal နှင့် mnemonic အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြန်ဖြေအတွက်အရံ adrenergic လှုပ်ရှားမှုများ၏အလှူငွေအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၌, အသစ်အဆန်းလေ့ကိုသိုထားသောနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သင်တန်းအခြေအနေတွင်မှဘာသာရပ်များမိတ်ဆက်အေးစက်နေ့ရက်တိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းနေဖြင့်သီးခြားအုပ်စုများအတွက်သွေးဆောင်ခဲ့သည်။ ကြိုတင် Pavlovian အေးစက်မှအရံ adrenergic receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းများ၏အကျိုးဆက်များသင်တန်းအခြေအနေတွင်အသစ်အဆန်းထိတွေ့ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ယခင်လေ့မှတဆင့်ကွောကျရှံ့ခွငျးအေးစက်အခန်းထဲကအတူ familiarized ခဲ့အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသောအုပ်စုများအတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှု2အဆိုပါ NTS အတွက်အရံ vagal afferents နှင့် brainstem အရေးပါအကြားလမ်းကြောင်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းစာနာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်တိုး၏ mnemonic အကျိုးဆက်များဖျန်ဖြေခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမိုင်နိုအက်ဆစ်ချိုမှု vagal ဆိပ်ကမ်းအချိုမှု (Sykes et al ။ 1997) ဆံ့ကတည်းက vagal afferents နှင့် NTS အာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်ရေးဖြန်ဖြေမူလတန်း transmitter ကိုသည်နှင့်အချိုမှု receptors NTS dendrites (Aicher et al ။ 1999, 2002) ရက်နေ့တွင်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ ထို့အပြင် AMPA glutamatergic အဲဒီ receptor ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NTS ပြုတ်ရည် CNQX (6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-Dion) ကိုမရေအာရုံကြော (Granata နှင့် Reis 1983a လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် activated NTS အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ် excitatory ပေါကျကှဲဖိနှိပ်; Andresen နှင့်ယန် 1990 ။ ) LC ဥတု (Grove et al 2005 တိုးမြှင့်ကြောင်းရေစီးကြောင်းတစ်ခုအကွာအဝေးအားဖြင့်၎င်း, Dorr နှင့် Debonnel 2006) သို့မဟုတ် amygdala သို့မဟုတ် hippocampus အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရေး (Miyashita နှင့်ဝီလျံ 2002 potentiates; ။ Hassert et al 2004) ။ ဒီအဆုံးရန်, AMPA အဲဒီ receptor ရန် CNQX vagal ဆိပ်ကမ်းကနေ input ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း NTS ၏ဒေသတွင်း၌ postsynaptic အချိုမှု receptors ပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ NTS ရည်ရွယ် cannulae နှင့်ဆေးထိုးအပ်အကြံပေးချက်များ၏တည်နေရာပြပုံ 1 တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။
[ပုံ 1 ။ ]
လေ့လာမှု3သင်တန်းအခြေအနေတွင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လေ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများကပြဆင်းရဲသောသူကိုမှတ်ဉာဏ် epinephrine ၏စနစ်တကျဆေးထိုးနှင့်အတူ Pavlovian အေးစက်ပြီးနောက်ရံလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒီလေ့လာမှုကလည်း vagal afferents နှင့် NTS အာရုံခံအကြား glutamatergic ဂီယာ epinephrine ၏မြင့်မားသောပြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်တိုက်ရိုက်အပြောင်းအလဲများကိုတှေးတောဆငျခွများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍလျှင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကနေပေါ်ထွက်လာတွေ့ရှိချက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်းများကသွေးဆောင်ကြောင်း arousal ထုတ်ဖေါ်သို့မဟုတ်ဖွငျ့ exogenously epinephrine နှင့်အတူစာနာလှုပ်ရှားမှုချဲ့ adrenergic ယန္တရားများအတွက်စွန်အဖျားမှာရှိတဲ့အစပျိုးနှင့်မရေ / NTS ရှုပ်ထွေးနေတဆင့်ဗဟိုမှတဆင့်ကူးစက်သောမှတဆင့် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။
အသစ်အဆန်းထိတွေ့မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲ Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်လေ့ကျင့်ရေးကထုတ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်တိုးတက်မှုရံ adrenergic စနစ်များကိုသက်ဝင်ကကမကထပြုခဲ့လျှင်ဒီလေ့လာမှုကဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာ epinephrine ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal များအတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆခဲ့သည်။ ဒါဟာအယူအဆဝတ္ထုအေးစက်အခြေအနေတွင်ထိတွေ့ကြွက်များတွင်အရံβ-adrenergic receptors မှ binding epinephrine ပိတ်ဆို့ဖို့အရံβ-adrenergic အဲဒီ receptor ရန် sotalol အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့သည်။
အခြေအနေများကိုလှုံ့ဆော်မှု (CS; သေံ) ၏နောက်ဆုံးတင်ပြချက်မှပြသခဲ၏ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင်တစ်ဦးက Two-လမ်း factorial ANOVA ငါးခု CS-ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) စုံတွဲနဲ့ဝယ်ယူစဉ်က၎င်းတို့၏အတွက်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှစာရင်းအင်းကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှား အဆိုပါ CS သေံအမေရိကန် footshock တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော predicator သည်နှင့်အေးခဲနေသော elicits, F (1,20) = 1.48, P ကို ​​= NS (Pre-ထိတွေ့ / ဆား 88.38 ± 7.3, Pre-ထိတွေ့ / sotalol 90.68 ± 4.0, မဟုတ်သောကြောင့်သင်ယူဖို့စွမ်းရည် Pre-ထိတွေ့ / ဆား 97.28 ± 2.0 non-Pre-ထိတွေ့ / sotalol 84.16 ± 6.9) ။
တစ် ဦး က Two- လမ်း ANOVA လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော Pavlovian အခန်းထဲက (F (1,20) = 21.26, P <0.01; ပုံ) ထိန်းသိမ်းမှုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း CS ၏သုံးတင်ပြစဉ်အတွင်းပြခဲ၏ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်ကုသမှု၏သိသိသာသာခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုညွှန်ပြ 2A) ။ Post-hoc စမ်းသပ်မှုများအရ CS တင်ဆက်မှုများတွင်ကြိုတင်မတွေ့မီတိရိစ္ဆာန်များသည်လေ့ကျင့်ခြင်းမတိုင်မီ ၂၄ နာရီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောအခန်းရှိတိရိစ္ဆာန်များထက်သိသိသာသာပိုမိုအေးခဲကြောင်းပြသခဲ့သည် (P <24) ။ ထို့အပြင် non-pre- ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ, အရံသရုပ်ဆောင်β-adrenergic အဲဒီ receptor ရန် Sotalol အုပ်ချုပ်, ဆားထိုး (P <0.05) ပေးထားသောသုံး CS CS တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းသိသိသာသာလျော့နည်းခြုံငုံအေးခဲပြ။ factorial ANOVAs နှင့်အတူအေးခဲစေရန်အသံအနိမ့်အမြင့်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရကြိုတင်မဖော်ထုတ်ရသေးသောဘာသာရပ်များသည်အခြားအုပ်စုများအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ် ဦး ချင်းစီမှတင်ပြမှုတစ်ခုချင်းစီကိုအေးခဲစေသောအဆင့်ကိုပြသသည် (ပုံ - ၂ ခတွင်ကြည့်ပါ) ။ ထို့ကြောင့်သက်ရှိများအားဝတ္ထုတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအစီရင်ခံတင်ပြမှုသည် (De Boer et al ။ 0.01; Handa et al ။ 2) စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာသင်ယူမှုကိုတိုးမြှင့် encoding ပြုလုပ်ရန်ကူညီသည်။ ထို့အပြင် CS-US တွဲဖက်မှုအဘို့မှတ်ဉာဏ်အပေါ်နှိုးဆော်ခြင်း၏အကျိုးရှိသောအကျိုးဆက်များβ-adrenergic အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျအရံဟော်မုန်းစနစ်များ၏ activation အပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်။
[ပုံ2။ ]
(က) အုပ်စုများ: sotalol (4 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူရံβ-adrenergic ပိတ်ဆို့မှုအသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်။ အသစ်တစ်ခုကိုအခန်းထဲကအေးစက်မတိုင်မီဆားစနစ်တကျဆေးထိုးပေးထား non- ကြိုတင်ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများ (* P <87) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CS ၏တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်း (ဆိုလိုသည်မှာ 0.05%) ခဲ၏သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြ။ ကြိုတင်ဝတ္ထုအခန်းထဲရှိအေးစက်ဖို့ sotalol နှင့်အတူအစွန်အဖျားရှိβ-adrenergic receptors ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ, 49%) retention ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း CS ၏တင်ပြချက် (** P <0.01) ကထုတ်ယူခဲ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ချ။ တိရိစ္ဆာန် ၂၄ ခုကိုအောက်ပါကုသမှုအဖွဲ့များအဖြစ်ခွဲခြားထားသည် (ကြိုတင်မထိတွေ့ - ဆား၊ n = 6; မပြန့်ပွား - ဆား - n = 5; မ - pre - ထိတွေ့ထားသည့် sotalol, n = 8; နှင့်ကြိုတင်ထိတွေ့ထားသည့် sotalol) , n = 5) ။ (ခ) သိမ်းဆည်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများ - retention စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း CS သေံတင်ပြချက်များအားစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ခဲပုံကိုဖော်ပြထားသည့်လိုင်းဂရပ်။ အခန်းအသစ်တစ်ခုတွင်အေးစက်မသွားခင် ip saline ထိုးဆေးဖြင့်ကုသခြင်းမခံရမီတိကျသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ပထမ CS တင်ဆက်မှု (* P <0.05) တွင်အခြားအုပ်စုများအားလုံးထက်သိသိသာသာမြင့်မားသောခဲယဉ်းမှုကိုပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲ CS တင်ပြချက်များအတွင်းဤအုပ်စုတွင်အေးခဲနေသောရာခိုင်နှုန်းသည်ကုသမှုအုပ်စုတစ်ခုစီ၏ (** P <0.01) ထက်သိသိသာသာပိုမိုကြီးမားသည်။ sotalol (4 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) နှင့်အတူအရံβ-adrenergic ပိတ်ဆို့ခြင်း CS သေံမှတိုးမြှင့်အေးခဲအပေါ်အသစ်အဆန်း - ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို attenuated ။
ဒုတိယလေ့လာမှုတစ်ခုဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့နေဖြင့်အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့သွေးဆောင်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှု NTS အတွက်အာရုံခံသက်ဝင်နေဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အဘို့မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်စေခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ activation အားဖြင့်ထင်ဟပ်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal β-adrenergic ဖို့မရေအာရုံကြောများတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုအမျှင်တစ်လျှောက် receptors binding epinephrine မှတဆင့်မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါမရေတစ်လျှောက်တွင်တိုးမြှင့်ထုတ်လွှင့်အလှည့်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်ကြောင်း vagal ဆိပ်ကမ်းအားဖြင့် innervated သော NTS အတွက်အာရုံခံ excite လိမ့်မယ်။ ဒီယူဆချက်ပေးထား non-Pre-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များများအတွက် NTS ချက်ချင်း Post-အေးစက်အတွက်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း AMPA အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal ကနေမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှု attenuate သငျ့သညျ။ ဒီလေ့လာမှုကနေကနဦးတွေ့ရှိချက်များကိုလေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်း CS-အမေရိကန်အသင်းအဖွဲ့များသင်ယူဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှကွဲပြားခြားနားမှုညွှန်ပြ။ အားလုံးအုပ်စုများအေးစက်နေစဉ်အတွင်းနောက်ဆုံး CS တင်ဆက်မှုမှအေးခဲနေသော၏နှိုင်းယှဉ်အဆင့်ဆင့်ကိုသရုပ်ပြ, F (1,25) = 0.670, P ကို ​​= NS (Pre-ထိတွေ့ / PBS 92.0 ± 5.0, Pre-ထိတွေ့ / CNQX 86.1 ± 5.2 / Non-Pre-ထိတွေ့ PBS 96.0 2.2 non-Pre-ထိတွေ့ / CNQX 96.3 ± 1.1) ±။
တစ် ဦး က Two- လမ်း ANOVA retention ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတင်ပြသုံး CSs မှခဲ၏ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်သိသိသာသာခြုံငုံသက်ရောက်မှု, F (1,25) = 9.60, P ကို ​​<0.01 ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု ၁ နှင့်တူသကဲ့သို့ NTS သို့မော်တော်ယာဉ်ထိုးသွင်းခြင်းမပြုမီကြိုတင်မထိတွေ့နိုင်သောတိရိစ္ဆာန်များသည် CS ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည့်အချိန်တွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းအတွက် NTS သို့ PQ (P <1) ဖြင့် CNQX အုပ်ချုပ်သောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ; ။ ပုံ 0.01A) ။ Post-hoc ရလဒ်များအရ NTS သို့ CNQX ၏နှစ်ဖက်ကူးစက်မှုသည်ကြိုတင်မတွေ့ရသေးသောတိရိစ္ဆာန်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့်ခဲများ၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေပြီးထိန်းချုပ်မှု (P <3) နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ပုံ ၃ (ခ) သည် CS သေသပ်စွာတင်ပြမှုသုံးခုတွင်တစ်ခုစီ၏ခဲနေသောပမာဏကိုပြသည်။ CS ၏ပထမဆုံးတင်ဆက်မှုတွင်ကြိုတင်မထိတွေ့နိုင်သောဆားကုသသောတိရိစ္ဆာန်များသည်ကြိုတင်မထိတွေ့နိုင်သော CNQX ကုသသောတိရိစ္ဆာန်များထက်သိသိသာသာပိုမိုအေးခဲသွားသည် (P <0.01)၊ non-pre- ထိတွေ့အုပ်စုသည် CS ၏ဒုတိယနှင့်တတိယတင်ဆက်မှု (P <3) စဉ်အတွင်းသိသိသာသာပိုပြီးအားလုံးအေးခဲ။ ဤတွေ့ရှိချက်များက Pavlovian ၏ကြောက်ရွံ့မှုအေးစက်မှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်အသစ်စက်စက် - သွေးဆောင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည် AMPA receptor antagonist CNQX ၏နှစ်ဖက်ကူးစက်မှုများနှင့်အတူ NTS ရှိ postsynaptic glutamate receptors များအားဝင်ရောက်ခြင်းကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်လျော့နည်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
[ပုံ3။ ]
(က) အဖွဲ့များ: အတိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏နျူကလိယအတွက် glutamatergic ဂီယာ၏ CNQX (1.0 μg) ပိတ်ဆို့ခြင်း (NTS) အသစ်အဆန်း - သွေးဆောင်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့် attenuates ။ အဆိုပါ NTS သို့မော်တော်ယာဉ်ပေးထား non- Pre- ထိတွေ့အုပ်စုတစ်စု 48 နာရီ retention ကိုစမ်းသပ် (** P <0.01) ကာလအတွင်းပေးထားသောသုံး CS တင်ပြချက်များစဉ်အတွင်းအားလုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများထက်ခဲ၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းပြသခဲ့သည်။ အေးစက်သည့်အချိန်၌အသစ်စက်စက်ထုတ်လွှတ်သည့်မှတ်ဉာဏ်တွင်တိုးမြှင့်မှုကို NTS ရှိ CNQX နှင့် AMPA receptors များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်လျော့ပါးစေသည်။ non-pre- ထိတွေ့ - CNQX အုပ်စုသည် CS များအတွက်သိသိသာသာပိုမိုဆင်းရဲတဲ့မှတ်ဉာဏ်ပြသခဲ့သည်သည် NTS (* P <0.05) သို့ PBS ပေးထား non- Pre- ထိတွေ့အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ် CS ဆွေမျိုးမှလျော့ချခဲထဲမှာထင်ဟပ်။ ဘာသာရပ်နှစ်ဆယ့်ကိုး ဦး ကိုအောက်ပါကုသမှုအုပ်စုများ (ကြိုတင်မတွေ့ရသေးသော PBS, n = 8; ကြိုတင်မထိတွေ့နိုင်သော PBS, n = 8; pre-ထိတွေ့ CNQX, n = 6; နှင့်ကြိုတင်မတွေ့မီ CNQX, n) သို့ခွဲခြားခဲ့သည် = 7) ။ (ခ) သိမ်းဆည်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများ - retention စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း CS သေံတင်ပြချက်များအားစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ခဲပုံကိုဖော်ပြထားသည့်လိုင်းဂရပ်။ ကြိုတင်မဖော်ထုတ်ထားသည့်ဆားအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည် CS (သေ P <0.01) ၏ဒုတိယနှင့်တတိယအကြိမ်တင်ပြမှုအတွင်းအခြားအုပ်စုများအားလုံးထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောခဲခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ non- ကြိုတင်ထိတွေ့ခြင်းဘာသာရပ်များအားဖြင့်ပြမြင့်မား၏မြင့်မားသောအဆင့်ကို CNQX နှင့်အတူ NTS အတွက် AMPA receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် attenuated ခဲ့သည်
နောက်ဆုံးလေ့လာမှု epinephrine ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပြင်းအားတိုးပွားလာအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal ထုတ်လုပ်သူတို့အားအလားတူယန္တရားများမှတဆင့် Pavlovian အေးစက်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိန်းသိမ်းရေးများ၏နှစ်မျိုးအလားတူလမ်းကြောင်းဝေမျှလိုလျှင်, epinephrine ကကမကထပြုခဲ့အေးစက်အတွက်မဆိုအပြောင်းအလဲများကိုမှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal များအတွက်အရေးပါဖြစ်ပြအတူတူ NTS ယန္တရားကမောက်ကမဖြစ်စေရန် attenuated ရပါမည်။ ဒါဟာအယူအဆ epinephrine (2 mg / kg) ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုမီ NTS ~0.1 မိအတွက် AMPA အဲဒီ receptor ရန် CNQX infusing အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးကုသမှုငါး CS-အမေရိကန်စုံတွဲနဲ့အေးစက်ပြီးနောက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အားလုံး Pre-ထိတွေ့ကုသမှုအုပ်စုများအေးစက်နေစဉ်အတွင်း CS ၏နောက်ဆုံးတင်ပြချက်မှအေးခဲနေသော၏နှိုင်းယှဉ်ရာခိုင်နှုန်းပြက F (1,26) = 0.057, P ကို ​​= NS (ဆား / PBS 94.6 ± 3.1, ဆား / CNQX 92.5 ± 4.0, epinephrine / PBS 97.9 ± 2.1, epinephrine / CNQX 94.3) 4.0 ±။
တစ် ဦး က Two- လမ်း ANOVA retention ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစဉ်အတွင်း CS ၏သုံးတင်ပြချက်များမှသရုပ်ပြခဲယုတ်ရာခိုင်နှုန်း၏ယုတ်ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်သိသိသာသာခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှု, F (1,26) = 12.13, P <0.01 ဖော်ပြခဲ့သည်။ Post-hoc စမ်းသပ်မှုများအရ PBS ၏ Intra-NTS ပြန့်ပွားခြင်းနှင့် epinephrine ကိုစနစ်တကျထိုးသွင်းခြင်းတို့ဖြင့်ကြိုတင်ထိတွေ့ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များသည်အခြားကုသမှုအုပ်စုများ (P <0.01) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CS နှင့်ခဲနေသောခဲများသိသိသာသာမြင့်မားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ NTS သို့ CNQX ၏နှစ်ဖက်ကူးစက်မှုသည် PBS ထိုးဆေးမှ ခွဲခြား၍ မရနိုင်ပါက Pine ထိုးဆေးများနှင့် ခွဲခြား၍ မရပါ။ ပုံ ၄ (ခ) သည် CS လှုံ့ဆော်မှုသုံးခုတွင်တစ်ခုစီ၏ခဲနေသောပမာဏကိုပြသည်။ epinephrine အုပ်စု (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) သည် CS (P <4) ၏ကန ဦး တင်ဆက်မှုကာလအတွင်းဆားထိန်းချုပ်မှုများထက်သိသိသာသာပိုမိုအေးခဲစေသော်လည်း၊ သူတို့၏ခဲခဲမှုနှုန်းသည် CNQX အုပ်စုများနှင့်မတူပါ။ သို့သော် CS ၏ဒုတိယနှင့်တတိယအကြိမ်တင်ဆက်မှုတွင် epinephrine ကုသသောတိရိစ္ဆာန်များသည်အခြားကုသမှုအဖွဲ့များ (P <4) ထက်သိသိသာသာပိုမိုအေးခဲသွားခဲ့သည်။ ဒီအုပ်စုထဲမှာအေးခဲအဆင့်ဆင့်ဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ကြသောကြောင့်သေံ - ထိတ်လန့်အသင်းအဖွဲ့များများအတွက်မှတ်ဉာဏ်အတွက် epinephrine- သွေးဆောင်တိုးမြှင့်သည့် NTS အတွက် AMPA receptors ၏ CNQX ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် attenuated ခဲ့သည် ဤတွေ့ရှိချက်များအရ vagus / NTS ရှုပ်ထွေးသောအရာသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအတွေ့အကြုံများမှဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအခြေအနေများအားကြောက်လန့်စေသောအခြေအနေများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုသိမ်းဆည်းပေးသည့် ဦး နှောက်စနစ်များကိုသယ်ဆောင်ရာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ယန္တရားများ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
[ပုံ4။ ]
(က) ကြိုတင်ထိတွေ့ထားသည့်အုပ်စုများ - NTS ရှိ AMPA receptors များကိုရန်ပြုခြင်းသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအေးစက်စေသော epinephrine - သွေးဆောင်မှုလွယ်ကူစေရန်ကူညီသည်။ လေ့လာမှုအပြီး epinephrine (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုစနစ်တကျဆေးထိုး ပေး၍ ၇၁% သောဆေးများကို ပေး၍ ကြိုတင်ထိတွေ့ထားသည့်တိရိစ္ဆာန်များပြသခဲ့သည့်အေးခဲမှုနှုန်းသည် (၇၁%) သည်ဆား၏ထိုးဆေးထိန်းချုပ်မှု (၄၄%) ထက် ၄၈- တွင် CS ၏တင်ပြချက်။ ဇ retention ကိုစမ်းသပ် (** P ကို ​​<0.1) ။ epinephrine (** P <71) နှင့်နှိုးဆော်ခြင်းမတိုင်မီ AMPA receptors ကို CNQX (44 μg) ဖြင့် NTS တွင်ပိတ်ဆို့သောအခါ systemine epinephrine အုပ်ချုပ်မှုမှထုတ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ ဆားများအားစနစ်တကျဆေးထိုး ပေး၍ ထိန်းချုပ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များမှ CNQX ကိုကြိုတင်ဖော်ထုတ်ထားသည့်မည်သည့်အဖွဲ့များကပြသခဲ့သနည်းဆိုသည့်အေးခဲသည့်အချိုးသည်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ တိရိစ္ဆာန် ၃၀ ကိုအောက်ပါကုသမှုအုပ်စုများအဖြစ်ခွဲထားသည် (saline-PBS, n = 48; saline-CNQX, n = 0.01; epinephrine-PBS, n = 1.0; နှင့် epinephrine-CNQX, n = 0.01) ။ (ခ) သိမ်းဆည်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများ - retention စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း CS သေံတင်ပြချက်များအားစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ခဲပုံကိုဖော်ပြထားသည့်လိုင်းဂရပ်။ epinephrine (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) အလွန်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအဖွဲ့သည် CS (သေ P <9) ၏ဒုတိယနှင့်တတိယအကြိမ်တင်ပြမှုအတွင်းအခြားအုပ်စုများအားလုံးထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောခဲယဉ်းမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အသံ - ထိတ်လန့်စေသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုအတွက်မှတ်ဉာဏ်တွင် epinephrine- သွေးဆောင်တိုးမြှင့်မှုအား NTS ရှိ AMPA receptors များအား CNQX (6 μg) နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ * P <10 ။
ဤရွေ့ကားစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုသင်ယူမှုအခြေအနေတွင်၏အသစ်အဆန်းများကသွေးဆောင် arousal များ၏ပြင်းထန်မှု Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အဘို့မှတ်ဉာဏ်သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သုံးယောက်စမ်းသပ်ချက်ကနေတွေ့ရှိချက်သေံ-shock အားလုံးအတှကျမှတျဉာဏျယခင်ကကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ရှေ့တော်၌ထိုလေ့ကျင့်ရေးအခြေအနေတွင် 24 ဇအတွက်လေ့ခြင်းဖြင့်ထိတွေ့ခဲ့အုပ်စုများမှတစ်ဦးလုံးဝဝတ္ထုအခြေအနေတွင်ဆွေမျိုးထဲမှာအေးစက်အုပ်စုများအတွက်တိုးမြှင့်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်။ လေ့လာမှု 1 ကိုလည်းဝတ္ထုလေ့ကျင့်ရေးအခြေအနေတွင်ထိတွေ့မှုကနေထုတ်လုပ် arousal ၏အကျိုးရှိသောလုပ်ရပ်တွေရံစာနာဟော်မုန်း activation ကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒီအဆုံး, sotalol အဆိုပါ arousal related ဟော်မုန်း epinephrine ခညျြနှောငျကြောင့်အရံβ-adrenergic receptors ပိတ်ဆို့ဖို့ preconditioning အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်အေးစက်အုပ်စုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲအပြုအမူ၏မြင့်မားရာခိုင်နှုန်း sotalol နှင့်အတူအေးစက်ရှေ့မှာဤ receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် attenuated ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု 1 ကနေရလဒ်တွေကိုတစ်ဦးအေးစက်အခြေအနေတွင်၏အသစ်အဆန်းထုတ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက် arousal-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို adrenal ဟော်မုန်းနှင့်အရံβ-adrenergic receptors ပေါ်ဤအကြောင်းဟော်မုန်း၏နောက်ဆက်တွဲအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို Secret ပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏အနက်အသစ်အဆန်း၏ mnemonic အကျိုးဆက်များရံဟော်မုန်းနှင့်စာနာ output ကိုအတွက် arousal-သွေးဆောင်အတက်အကျမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်း brainstem အာရုံခံ၏ activation နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်ရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်လေ့လာမှု2အတွက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ adrenal ဟော်မုန်း epinephrine β-adrenergic ဖို့ NTS (Kalia နှင့် Sullivan က 1995) တွင်အာရုံခံပေါ်မှာ brainstem နှင့် synapses တက်ကြောင်း vagal အာရုံကြောအမျှင်တစ်လျှောက် receptors (Lawrence et al ။ 1982) ချည်နှောင်။ အလှည့်အတွက်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းကနေအချိုမှုလွှတ်ခြင်းဖြင့် NTS အာရုံခံ excite, ထို vagal afferent အမျှင် (Miyashita နှင့်ဝီလျံ 2006) တစ်လျှောက်တွင် adrenal ဟော်မုန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးဥတုအတွက် arousal-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို (Granata နှင့် Reis 1983b; ။ Allchin et al 1994) ။ လေ့လာမှု2မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အသစ်အဆန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက် NTS အာရုံခံပေါ်သို့စိတ်လှုပ်ရှား vagal afferents ကနေအချိုမှုလွှတ်ရာအလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်။ ဒီလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဝတ္ထုအေးစက်အခန်းလေ့ကျင့်သင်ကြားဘာသာရပ်များအတွက်သေံ retention ကိုစမ်းသပ်မှုရွေးချယ်ချိုမှု receptor ရန် CNQX အတူ NTS အတွက် AMPA receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် attenuated ခံခဲ့ရစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိအေးခဲနေသောတိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
ဒါဟာ cue-shock ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု၏နောက်ပိုင်းတွင် retention ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အတွက်အသစ်အဆန်းသွေးဆောင်ဖို့အသုံးပြုစမ်းသပ်အခြေအနေများပေမယ့်, ပိုမိုပြင်းထန်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအသစ်အဆန်းထိတွေ့ mnemonic အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ရန်လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအပေါင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအမြီးထိတ်လန့်နှင့် တွဲဖက်. တစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခြေအနေတွင်နေရာချထားတစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြောင်၏ရှေ့မှောက်တွင်တွင်သို့မဟုတ်တောက်ပ illuminated ကြောင်းတစ်ခုမွငျ့မားပလက်ဖောင်းအတွက် Spatial များအတွက် LTP ၏ induction, ရစေတယ်ပေါကျကှဲအလားအလာများနှင့်မှတ်ဉာဏ် disrupts (။ ။ Xu et al 1990; Akirav နှင့်ငလျင်-Levin 1994; စိန်နဲ့ Park 1997 စိန် et al 1999, 2000) သင်ယူခြင်း။ မှတ်ဉာဏ်နှင့် nonstressful အသစ်အဆန်းထိတွေ့မှု (Kinney နှင့် Routtenberg 1993 ၏အကျဉ်းကာလကို အသုံးပြု. မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်အစီရင်ခံသူတို့အားဆွေမျိုး, ဤလေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ Synaptic plasticity အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု; ။ Vankov et al 1995; ။ Izquierdo et al 2000, 2001, 2003; Viola et al ။ 2000; ။ လီ et al 2003; Straube et al 2003a, ခ; ။ ။ Davis et al 2004; Moncada နှင့် Viola 2007; ။ Sierra-mercado et al 2008) ကို arousal ၏ပြင်းအားနှင့်သွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှု၏နောက်ဆက်တွဲအဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်အကြောင်း, သက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးအခွအေနဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်ဝတ္ထုအခင်းအကျင်းမှအကျဉ်းထိတွေ့ adrenal ဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်မှတဆင့် arousal တစ်အလယ်အလတ်အဆင့်ကိုဖန်တီးလျှင်, လေ့ဘာသာရပ်များမှ epinephrine ၏အုပ်ချုပ်မှုလုံးဝအသစ်သောသောအခြေအနေတွင် Pavlovian အေးစက်ကထုတ်လုပ်ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအဆင့်အထိ arousal တိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ ဒီအရဝုဏ်ဆား-ကုသကြိုတင်မှဆွေမျိုး (48 / ကီလိုဂရမ် mg) ကွောကျမကျသွေးဆောင်ခဲပိုပြီး intensive အဆင့်ဆင့် Post-လေ့ကျင့်ရေး epinephrine ပေးထား Pre-ထိတွေ့ဘာသာရပ်များအတွက် 0.1-ဇ retention ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်ပြနေကြသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်နေဖြင့်နောက်ဆုံးလေ့လာမှုမှာစမျးသပျခဲ့သညျ စမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အတွက်ခဲအပြုအမူကသာပျော့အဆင့်ဆင့်ပြသကြောင်းထိန်းချုပ်မှု -exposed ။ လေ့လာမှု3ကနေတွေ့ရှိချက် Pre-ထိတွေ့ဘာသာရပ်များ epinephrine Post-အေးစက်ပေးထားကြောင်းထင်ရှား Pre-ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်ထက် 48-ဇ retention ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်သေံသာတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်းအပြုအမူအေးခဲနေသောတစ်ခုသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ရာခိုင်နှုန်းပြ။ ခဲအပြုအမူတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွင်ထင်ဟပ်အဆိုပါ epinephrine-သွေးဆောင်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်သည့်မရေအာရုံကြောနှင့် NTS အတွက် postsynaptic အချိုမှု receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် brainstem အကြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စီးဆင်းမှုကြားဖြတ်ခြင်းဖြင့် attenuated ခဲ့သည်။ စနစ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်အုပ်စုပေးထား epinephrine အကြား CS-သွေးဆောင်ခဲ၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အချိုမှု receptor ရန်အတွက် NTS အတွက် CNQX မကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါခြုံငုံတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဝတ္ထုအခြေအနေတွင်ထိတွေ့ဇီဝကမ္မ arousal တိုးပွါးကြောင်းအကြံပြု, ဤအပြောင်းအလဲများကိုရံဟော်မုန်းစနစ်များလွှမ်းမိုးနေဖြင့် Pavlovian အေးစက်၏ခွန်အား impact ။
ယခင်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောနှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားအဖြစ် arousal အတော်ကြာဇီဝကမ္မညွှန်းကိန်းအသစ်တခုအခြေအနေတွင် (Carrive 2000) ကိုကနဦးထိတွေ့မှုအပြီးတိုးပွားလာသည်ဟုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, အသစ်တစ်ခုကိုလှောင်အိမ်သို့ကျွမ်းတဝင်မရှိသောထိုကဲ့သို့သောရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု, ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်နေရာချထားဖို့ထိတွေ့မှု, ပလာစမာထဲမှာ epinephrine ၏မြင့်မားသောပြင်းအား (de Boer et al အားဖြင့်ထင်ဟပ်သောစာနာ-adrenal စနစ်၏တိုးမြှင့ activation အတွက်ရလဒ်တွေကို။ 1990 ) ။ သုတေသနလည်းအသစ်အဆန်းဤပုံကြီးချဲ့ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွဖို့ထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ်ရွေ့ထိတွေ့မှုဖြစ်စေသဖြင့်တစ်ဦးဝတ္ထုအခြေအနေတွင်မှဘာသာရပ်များ familiarizing အားဖြင့်နှိမ်နင်းဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ (de Boer et al 1988; ။ ။ Konarska et al 1989, 1990) ။ ဤအဇီဝကမ္မတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများအသစ်အဆန်းဇီဝကမ္မ arousal သက်ရောက်မှုမှတ်ဉာဏ်ကိုထုတ်လုပ်ပေးသောအားဖြင့်ယန္တရားဆနျးစစျဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်မှု 1 ကနေတွေ့ရှိချက် epinephrine အသစ်သောဖြစ်ရပ်များမှတ်ဉာဏ်သို့ encoded နေကြသည်ခွန်အား impact ဖို့အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal များအတွက်စွမ်းရည်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ CS ဆား-ထိုးသွင်း Pre-ထိတွေ့တိရစ္ဆာန်များအဘို့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အခါရံβ-adrenergic အဲဒီ receptor ရန် sotalol ပေးသော Non-Pre-ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ပြသတိရိစ္ဆာန်များခဲ၏အဆင့်ဆင့်မှနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်အေးခဲနေသောများ၏အဆင့်ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒီအမြင်ကိုလည်းခြီးမွှောကျနှလုံးခုန်နှုန်း, vagal အာရုံကြောအမျှင်တစ်လျှောက်တိုးလာဥတုနှင့်သွေးဖိအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် arousal-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများသိသာထင်ရှားစွာရံβ-adrenergic receptors (ဗန်တွင်း Buuse et al ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချနေကြသည်ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ 2001 ; ဗန်တွင်း Buuse 2002; Carrive 2006; Miyahsita နှင့်ဝီလျံ 2006) ။ စမ်းသပ်မှု 1 ကနေတွေ့ရှိချက် arousal ပြည်နယ်များလှုံ့ဆော်မှု၏အသစ်အဆန်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရနိုင်ပြီး, အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာလက်ရှိလေ့လာမှုအဘို့ကိုရှေးခယျြ sotalol ၏ဆေးထိုးနှိုကျ sotalol ၏ဤဆေးထိုးမှသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအယ်လ် Nattel et (β-adrenergic receptors ပြည့်နေပါသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့အနိမ့်ခဲ့အကြံပြုခြင်း, Pre-ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်များအဘို့မှတ်ဉာဏ်အယှက်မပြုခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ 1989 ) ။ Pre-ထိတွေ့ sotalol-ကုသဘာသာရပ်များအတွက်မဆို observable ချွတ်ယွင်းမှု၏မရှိခြင်းပျော့လေ့ကျင့်ရေး footshock ထုတ်လုပ်စွမ်းဆောင်ရည်အေးခဲနေသော၏ကြမ်းပြင်သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အပျော့စားပြင်းထန်မှု 0.35-ma footshock cued-အေးစက်သင်ယူမှု (။ Baldi et al 1992 Phillips ကနှင့် LeDoux 2004) ကိုဆွဲထုတ်နိုင်စွမ်းကြောင်းစျေးမှာပြင်းထန်မှု၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပြင်းထန်မှုပိုကောင်းအသစ်အဆန်းများကထုတ်လုပ် arousal non-Pre-ထိတွေ့အုပ်စုများအတွက်သင်ယူမှုအေးစက်ခြုံငုံကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အေးခဲနေသော၏ပျော့အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အပြုအမူအေးခဲနေသောမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းထုတ်လုပ်ကြောင်းလေ့ကျင့်ရေး parameters တွေကို, တကယ်တော့, sotalol နှင့်အတူရံβ-adrenergic receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းလိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်းထုတ်လုပ်သရုပ်ပြမယ်လို့။ ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် သို့သော်လေ့ကျင့်ရေး regimen ဤအမျိုးအစား arousal အတွက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်တိုးကထုတ်လုပ်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖုံးကွယ်ပါလိမ့်မယ်။
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ adrenal စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း epinephrine သောလူသားမြားသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရပ်များအတွက်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး modulates ဖော်ပြသည်။ Williams က et al ပါ (amygdala နှင့် hippocampus ၏ noradrenergic activation potentiate ရန်, (1986 Introini-Collison et al ။ ။ Sternberg et al 1992) နှင့်သွယ်ဝိုက် NTS များနှင့် LC အာရုံခံပေါ်ဤအကြောင်းသက်ရောက်မှုရံβ-adrenergic receptors အပေါ်တိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင် epinephrine မှစွပ်စွဲနေကြသည်။ 1998, 2000; Miyashita နှင့်ဝီလျံ 2004) ။ စမ်းသပ်မှု2ရံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်ဟော်မုန်းထွက်ရှိမှုအတွက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်တိုးရံ vagal အမျှင်များနှင့်သူတို့က NTS အတွက်အပေါ်သို့ synapse အဆိုပါအာရုံခံအကြား Synaptic ဂီယာတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဗဟို mnemonic အပြောင်းအလဲနဲ့ထိခိုက်စေခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမရေအာရုံကြောဟာမရေ innervate epinephrine လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုကြီးထွားပြသသောအာရုံခံအင်္ဂါများ၏ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်၏အရံနောက်ဆုံးတွင်ကတည်းက putative လမ်းကြောင်းအဖြစ်ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည် (Shapiro နှင့် Miselis 1985; ။ Coupland et al 1989; Paton 1998a, ခ), နှင့် epinephrine ၏စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲ NTS အာရုံခံအတွက်မရေအာရုံကြောတလျှောက်ရရှိစေရန်အာရုံကြော Impulses သတင်းပို့အဖြစ်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများတိုးပွါး (; Miyashita နှင့်ဝီလျံ 1990 Papa et al 2006 ။ ) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မရေအာရုံကြောအလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံများနှိုးဆွသောတုန့်ပြန်ဦးနှောက်မှ epinephrine ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအောက်ပါရံဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများကို relaying နိုင်စွမ်းကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါအမိုင်နိုအက်ဆစ်ချိုမှုသူတို့ကဦးနှောက်ကို stem အတွက်အပေါ်သို့ synapse vagal afferents နှင့်အာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်ရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်မူလတန်း neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, vagal အမျှင်ကွှတိုက်ရိုက်ဆွဟာ NTS အတွက်တိုင်းတာအချိုမှုပြင်းအားအတွက်သိသိသာသာတိုးဖြစ်ပေါ်စေသည် (Granata နှင့် Reis 1983b; ။ Allchin et al 1994) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, စမ်းသပ်မှု2ပုရန်နှင့်အတူ NTS အတွက်အချိုမှု receptors ပိတ်ဆို့ခြင်း CNQX တစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခြေအနေတွင်အေးစက်တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှု attenuates ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ CNQX ၏ဆေးထိုးသည့် NTS အတွက် AMPA receptors ပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုယခင်ကမရေအာရုံကြော (; Andresen နှင့်ယန် 1983 Granata နှင့် Reis 1990a) ၏ဆွတုံ့ပြန် NTS အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်ဖိနှိပ်ပြရှိသူများအနေဖြင့်အထူးသကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ဒီစမ်းသပ်မှုကနေတွေ့ရှိချက် NTS အတွက် vagal afferents နှင့် brainstem အာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သည့်အခါမှတ်ဉာဏ်အတွက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal တိုးမြှင့် attenuated ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါမရေအာရုံကြောအားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုမှပါးဖြစ်ကြောင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုအတွင်း arousal-သွေးဆောင်တိုးသင်ယူမှုဖို့အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်း brainstem အာရုံခံအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော AMPA အဲဒီ receptor subunit စကားရပ်နှင့် synapses မှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအတွက်တိုးအဖြစ် NTS အတွက် glutamatergic အချက်ပြ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ, တိုးမြှင့်ရာမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ထိုကဲ့သို့သောသွေးတိုးရောဂါနှင့်မရေအာရုံကြောနှိုးဆွအဖြစ်ရံအချက်ပြမှုများကွှကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် Kline 2008) ။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်အဖြစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုမြင့်ပြည်နယ်များနှင့်အတူရွေးချယ်ဝတ်ရည်, ထိုကဲ့သို့သော dendritic ကျောရိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကိုအဖြစ် NTS အတွက် AMPA receptors ၏ GluR1 subunit ဆံ့သောသူတို့ကိုကျောရိုး၏အချိုးအစားတစ်ခုတိုး Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့အရေအတွက်ကပြ နှင့် normotensive ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု NTS အတွင်းစုစုပေါင်း AMPA အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်တစ်ခုတိုး (Aicher et al 2003; ။ Saha et al 2004; ။ ။ Hermes et al 2008) ။ အလားတူပင်တစ်ခုစိတ်ခံစားမှုအဖြစ်အပျက်ကနေကြီးထွား arousal ၏စူးရှသောဖြစ်စဉ်များမှနှိုင်းယှဉ်သွေးဖိအားအတွက်အကျဉ်းပြောင်းလဲမှု NTS အတွက် glutamatergic synapses မှာတိုးလာကူးယူညွှန်ပြကြောင်းအာရုံခံအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်း။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, စုပေါင်းတွေ့ရှိချက်အလွန်အမင်းအချိုမှုများလွှတ်ပေးရန်မှတဆင့် NTS အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ထုတ်လုပ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံများနှိုးဆွသောစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရပ်များပိုင်းတွင် encoded နောက်ပိုင်းတွင်ရှည်လျား tern မှတ်ဉာဏ်သို့သည်အခြား limbic အဆောက်အဦများအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်သောတဦးတည်းယန္တရားကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အများအပြားကမူအကျင့်လေ့လာမှုများ NTS အတွက်တိုးမြှင့်ချိုမှုဂီယာစိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုနှိုးဆွသောအဘို့မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်း၏အာရုံခံ vagal afferents နှင့်အတူ synapse ရှိရာ NTS သို့အချိုမှု microinjecting ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များရေ-လှုံ့ဆော်မှု inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် (။ Kerfoot et al 2002 Miyashita နှင့်ဝီလျံ 2008) တွင်ပြီးခဲ့သည့်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြရှိရာအခြေအနေတွင်အဘို့မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှတ်ဉာဏ်ဟာအေးစက်အခန်းထဲသို့ Non-Pre-ထိတွေ့မှုကနေကြီးထွား arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်သည့်ရွေးချယ် AMPA အဲဒီ receptor ရန် CNQX လုပ်ကွက်အတူ NTS အတွက် glutamatergic ဂီယာ antagonizing ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု NTS အတွက် postsynaptic AMPA receptors cued-ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal ထံမှဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုများကိုထုတ်လွှင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်မှတ်ဥာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် arousal ၏အကျိုးဆက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုတိုးချဲ့။
ယေဘုယျအားစမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2ကနေတွေ့ရှိချက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal အကြံပြုရံဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်နှင့် vagal / NTS ရှုပ်ထွေးသော၏နောက်ဆက်တွဲ activation လွှမ်းမိုးနေဖြင့် mnemonic ဖြစ်စဉ်များသာသက်ရောက်သည်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတိုက်ရိုက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal နှင့်အရံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အတက်အကျမှအထိခိုက်မခံသောဦးနှောက်ကို stem အတွက် NTS အာရုံခံအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုအောက်ပါဖြန့်ချိလျက်ရှိသောရံဟော်မုန်းအကြားအပြန်အလှန်ဖြေရှင်းရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဒီအဆုံး pre-ထိတွေ့ (nonaroused) တိရိစ္ဆာန်များသီးခြားအဖွဲ့များကိုဆားသို့မဟုတ် epinephrine ၏ Post-အေးစက်ထိုးလက်ခံရရှိကြောင်းချွင်းချက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့တူညီလုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့ Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်တာဝန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု3ကနေတွေ့ရှိချက်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal တုံ့ပြန်လေ့လာမှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင်ရံဟော်မုန်း Secret ပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုက epinephrine ထိုးနှင့်အတူတိုးပွားလာရံစာနာ output ကိုသိသိသာသာပုံမှန်လေ့မှတဆင့်အေးစက်အခန်းထဲသို့ Pre-ထိတွေ့အုပ်စုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏မဖြစ်စလောက်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Pre-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက် epinephrine ထုတ်လုပ်ဇီဝကမ္မ arousal အတွက်အပြောင်းအလဲများစမ်းသပ်ချက် 1 နှင့်2အတွက်စမ်းသပ်ပြီး Non-Pre-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိဖို့အတော်လေးဆင်တူသော CS မှအေးခဲနေသော၏အလွန်မြင့်မားမှုနှုန်းခဲ့သည်။ (။ Dornelles et al 2006 ။ 2006 Roozendaal et al), ဆက်တိုက်ကြည့်ရှုဇီဝကမ္မ arousal ထိုကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်တာဝန်များကိုလေ့လာပြီးနောက် epinephrine သို့မဟုတ် corticosterone စီမံခန့်ခွဲ, cued ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက် (။ Hui et al 2007) အောက်ပါကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်တိုးပွါးသောအခါထို့အပြင်အတွက် ကြားနေဆလိုက် (Cahill နှင့် Alkire 2003) ၏, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားအခြေအနေတွင် (Introini-Collison နှင့် McGaugh 1988) တွင်တစ်ဦး footshock လက်ခံရရှိခြင်း, CS, အရာဝတ္ထု၏တည်နေရာအဘို့မှတ်ဉာဏ်, ဆလိုက်ကြည့်ရှုအားပေး, ဒါမှမဟုတ်ပေးထားသောတစ်ဦး footshock တိုးတက်ရာဆက်စပ်။ စမ်းသပ်မှု3ကနေတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် arousal သက်ရောက်မှုမှတ်ဉာဏ်၏ကြီးထွားပြည်နယ်များအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဤလေ့လာမှုကြောင့် NTS အတွက်တူညီတဲ့ glutamatergic ယန္တရားလိုအပ်သည်အတွက်အရံ epinephrine ဟာအသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် arousal မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပြသသည်။ အသစ်အဆန်းများနှင့်အရံ adrenergic ယန္တရားများ Synaptic ဆက်သွယ်မှုခိုင်မာစေရန်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်မလုပ်ကြောင်း mounting သက်သေအထောက်အထားပေးထားလက်ရှိတွေ့ရှိချက်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးရှိသောအကျိုးဆက်များဖြန်ဖြေအတွက်မရေနှင့် NTS ရှုပ်ထွေးသောအကြားအချက်ပြ၏အရေးပါမှုကို underscore ။
Charles River Laboratories (Wilmington, MA) မှရရှိသောယောက်ျားလေးရှစ်ဆယ့်သုံး Sprague-Dawley ကြွက်များ (၂၇၅-၃၀၀ ဂ) ကိုစမ်းသပ်မှု ၁ (= = ၂၄)၊ ၂ (= = ၂၉) နှင့် ၃ (= = ၃၀) တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြွက်များကိုတစ် ဦး ချင်းပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင်ထားရှိပြီးနံနက် ၇း၀၀ နာရီတွင်မီးများဖြင့် ၁၂ နာရီအလင်းရောင်မှောင်မိုက်သံသရာတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၇- und မငြိမ်မသက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကာလအတွင်းအစားအစာနှင့်ရေသည်ဗီဗရီရီယမ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ စမ်းသပ်မှုအားလုံးသည်ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီ၏မူဝါဒများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက် atropine sulfate တစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိ (0.1 / ကီလိုဂရမ်, ip, အမေရိကန်ဆေးဝါးအပေါင်းအဖေါ်များ, Inc mg) ကိုထုံဆေးဆိုဒီယမ် pentobarbital (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip, ဆရာတော်ကြီး Laboratories) ၏တစ်ဦးဆေးထိုးခြင်းဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင် 50 မိလိုက်ကြ၏။ တစ်ဦးက midline ဦးရေပြားခွဲစိတ်ခဲ့များနှင့် 15-မီလီမီတာရှည်, အပိုပါးလွှာ-မြို့ရိုးကိုသံမဏိလမ်းညွှန် cannulae (25.0 gauge, အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများ) ကို NTS အထက်မြန်မာနိုင်ငံသ2မီလီမီတာ (AP ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ: -13.3; ML: bregma ထံမှ 1.0 ± ; DV: ဦးခေါင်းခွံမျက်နှာပြင်ကနေ -5.6) Paxinos နှင့် Watson (1986) ၏ Atlas ထဲကနေအဆင်ပြေအောင်သြဒီနိတ်အရသိရသည်။ cannulae နှင့်ဦးခေါင်းခွံ screw နှစ်ခုကိုလမ်းပြသွားဘိလပ်မြေနှင့်အတူဦးခေါင်းခွံမှကျောက်ချရပ်နားခဲ့ကြသည်, နှင့်ဦးရေပြား sutures နှင့်အတူအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ Stylets (15 မီလီမီတာ, 00 အင်းဆက်ပိုးမွှားခှဲစိတျတံသင်) cannula patency ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထိုး cannulae သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ penicillin (0.1 mL, im, ဝိန်း Fort Dodge တိရိစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး) postsurgical အီသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ analgesic buprenex (0.05 mL SC, Hospira, Inc) နှင့်အတူချက်ချင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြွက်များခွဲစိတ်အောက်ပါကအနည်းဆုံး 1 ဇများအတွက်အပူချိန်-controlled အခန်းကနျြရစျစီလေ့လာမှုရဲ့ start မတိုင်မီပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်7ဃပေးထားခဲ့ကြသည်။
ကြွက်တစ်ခုစီသည်စမ်းသပ်သူ၏ရင်ခွင်၌လက်ဖြင့်ချုပ်နှောင်ထားပြီးစကတ်များကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ၁၇ မီလီမီတာရှည်သော ၃၀-gauge ဆေးထိုးအပ်များကို NTS လမ်းညွှန်ဆေးခြောက်ထဲသို့နှစ်ဖက်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဆေးထိုးအပ်၏အစွန်အဖျားလမ်းညွှန်ဆေးခြောက်၏အောက်ခြေထက် ၂ မီလီမီတာပိုကျယ်သည်။ PE-17 (polyethylene) tubing မှတဆင့်အပ်များကို 30-μL Hamilton သည်ပြွတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အလိုအလျောက်ဆေးထိုးအပ်စုပ်စက် (Sage-Orion) သည် PBS ၏2μLသို့မဟုတ် AMPA receptor antagonist CNQX (၁.၀ μg; Sigma Aldrich) ကို NTS သို့ ၆၀ စက္ကန့်အတွင်းကယ်ဆယ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြု CNQX ၏ဆေးထိုး NTS အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (Andresen နှင့် Yang 10) ကိုထိရောက်စွာလျှော့ချသောအမျိုးမျိုးသောဆေးများမှရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအပြည့်အဝဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်ထိုးသွင်းပြီးနောက်နောက် ၆၀ စက္ကန့်ကြာသည့်တိုင်အောင်ဆေးထိုးအပ်များကိုလမ်းညွှန်စည်သွတ်တွင်ထားရှိသည်။ ထို့နောက်၎င်းဆေးပြားများကိုဆေးခြောက်ထဲသို့ထပ်ထည့်ပြီးကြွက်တစ်ကောင်စီသည်ဆားသို့မဟုတ်အက်ပီနင်ဖရင် (၀.၁ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကို IP ဆေးထိုးပေးခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်ဘာသာရပ်များအတွက်အေးစက်အိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့နေရာချထားမတိုင်မီ4မိ, ဆားသို့မဟုတ် sotalol ၏စနစ်တကျ (ip) ထိုးဆေး (5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) preconditioning ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတှကျအသုံးပွုအဆိုပါယန္တရားတစ်ခု Coulbourn အပြုအမူအခန်းထဲကပိုကြီးတဲ့အသံက-attenuating သေတ္တာ (12 လက်မအကျယ်× 10 လက်မအတွက်ပူးတွဲခဲ့ (12 လက်မအကျယ်× 13 လက်မအတိမ်အနက်ကို× 16 လက်မအမြင့်, မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ။ H28-16) ၏ပါဝင်သည် 16 လက်မအမြင့်×နက်ရှိုင်း) ။ အခနျး၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျောရိုးကိုသံမဏိနှစ်ဖက်နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပလပ်စတစ်နဲ့ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့သံမဏိဇယားကွက်ကြမ်းပြင်၏လုပ်ခဲ့ကြသည်။ နမူနာလှုပ်ရှားမှုတိုင်း 24 msec ကြောင့်အေးခဲနေသောအမူအကျင့် (မျှပုံစံ။ H61-400) တစ်ဦးအနီအောက်ရောင်ခြည်လှုပ်ရှားမှုမော်နီတာတွေနဲ့အမူအကျင့်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခန်းသေံ-shock အားလုံးအတှကျ retention ကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုတဲ့လေ့ကျင့်ရေးယန္တရားမှအတိုင်းအတာအတွက်တူညီခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အေးစက်အခန်းတို့ထံမှဆက်စပ်အခြေအနေကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကနေသီးခြားကွဲပြားခြားနားသောအခန်း၌တည်ရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအေးစက်အခန်းများသင်တန်းနှင့် retention ကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက် 10% အရက်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သန့်စင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုယန္တရားအားလုံးကိုပစ္စည်းများ Coulbourn တူရိယာမှရရှိသောခဲ့ကြသည်။
ကြွက်အမူအကျင့်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီဓာတ်ခွဲခန်း 1 ဇသို့ vivarium ကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကြိုတင်အေးစက်မှတစ်နေ့မှာအဆိုပါကြွက်များအခမဲ့ရှာဖွေရေး၏5မိအတူအေးစက်အခန်းထဲသို့ habituated ခဲ့ကြသည်။ non-Pre-ထိတွေ့မှုအခွအေနေမှတာဝန်ပေးအပ်တိရစ္ဆာန်များကိုလည်းဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ပို့ဆောင်ပေမယ့် pre-ထိတွေ့အဖွဲ့အေးစက်အခန်းထဲသို့ habituated သောကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဆယ်လေးနာရီအကြာတွင် pre-ထိတွေ့သို့မဟုတ် Non-Pre-ထိတွေ့အုပ်စုများအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုအေးစက်အဘို့အခနျးထဲသို့ဝထားရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်များဆက်စပ်ရှိကြ၏သုံးမိနစ်ခန့်အကြာတွင်တစ် 30-စက္ကသေံ (5 kHz, 75 DB) CS 1-ma အမေရိကန် footshock တစ် 0.35-စက္ကနှင့်အတူတင်ပြခြင်းနှင့် coterminated ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 60-စက္က intertrial ကြားကာလလာမည့်သေံ၏တင်ပြချက်ကနေ footshock ကွဲကွာ။ အေးစက်ငါးခုသေံ-shock စွမ်းပါဝင်သည်။
တိရစ္ဆာန်များအေးစက်အောက်ပါ CS သေံ 48 ဇဘို့မှတ်ဉာဏ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအခန်းထဲသို့အားလုံးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်သစ်ကိုအခန်းရှာဖွေရေး၏ကနဦး 3-မိကာလပေးထားခဲ့သည်။ ထိုနောက်မှတစ် CS သေံ (5 kHz, 75 DB) အမေရိကန် footshock ၏မရှိခြင်းအတွက် 30 စက္ကများအတွက်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 30-စက္က intertrial ကြားကာလတဦးတည်းသေံ၏အဆုံးနှင့်နောက်လာမည့်၏တင်ဆက်မှုကွဲကွာ။ အဆိုပါ CS သေံသုံးခုတင်ပြချက်များဟာ retention ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းပေးထားခဲ့ကြသည်။ အချိန်ဘာသာရပ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းယခင်က footshocks နှင့်အတူတွဲသော CS သေံ၏တင်ဆက်မှုကာလအတွင်းတစ်ဦးအေးခဲနေသောတုံ့ပြန်မှု retention ကိုတစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုပြ။
ကြောက်ရွံ့ခြင်းအခြေအနေကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမှအပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များသည်သေလွန်သောအချိန် - SE ကြွက်များသည်လေသံကိုတင်ပြစဉ်ရွေ့လျားနေသောအချိန်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ retention စမ်းသပ်စဉ်အတွင်းတိုင်းတာထားသောအေးခဲနေသောအပြုအမူများအတွက်အုပ်စုနှင့်အုပ်စုအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အားဖြင့် ANOVA ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Fisher ၏ post-hoc စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ P <0.05 ထက်လျော့နည်းခြားနားချက်များကစာရင်းအင်းသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
ဆေးထိုးအပ်အကြံပေးချက်များ၏မှန်ကန်သောနေရာချထားအတည်ပြုရန်နှင့်စမ်းသပ်မှုများပြီးစီးပြီးနောက် NTS အတွက် cannulae လမ်းပြတစ်ဦးချင်းစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်တို့သည် euthanasia ဖြေရှင်းချက် Euthasol (0.5 mL, Virbac ကော်ပိုရေးရှင်း) နဲ့ anesthetized နှင့် 0.9% formalin အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 10% ဆားနှင့်အတူ intracardially perfused ခဲ့သည်။ တစ်ဦး vibratome အပေါ် sectioned သည်အထိဦးနှောက် 10% formalin ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ 60 μmထူဖြတ်ခဲ့ကြသည်, ဖန်ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခရိုမီယမ်-လူမီနီယံနှင့်အတူ subbed နှင့် cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူစွန်း။ အဆိုပါ cannulae နှင့်ဆေးထိုးအပ်အကြံပေးချက်များများ၏တည်နေရာများကိုအဆိုပါဆလိုက် (ပုံ။ 1) ၏ကျယ်ဝန်းစီမံချက်များဆန်းစစ်ကစိစစ်ခဲ့သည်။ ငါးတိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်ဒေတာများဖြစ်သောကြောင့်မမှန်ကန်ကြောင်း cannula နေရာချထား၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ကသူတို့ predoctoral ထောက်ခံမှုများအတွက်အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံးမတူကွဲပြားခြင်းအစီအစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောပံ့ပိုးမှုများကို Erica ဂျေလူငယ်တို့, Erin C. Kerfoot နှင့် Sumi ပန်းခြံကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သုတေသနအမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း (CLW ဖို့တွင် NSF-0720170) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
E-mail ကို [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; ဖက်စ် (434) 982-4785 ။
အပိုဒ် http://www.learnmem.org/cgi/doi/10.1101/lm.1513109 မှာအွန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဏဇွန်လ 16, 2009 Received ။
ဏဇူလိုင်လ 31, 2009 လက်ခံခဲ့သည်။
အေးနွေဆိပ်ကမ်းဓာတ်ခွဲခန်း Press က * မူပိုင်ခွင့်© 2009
1 ။ Aicher လုပ် SA,
2 ။ မစ္စတာရှားမားက S,
3 ။ Pickel VM က
။ 1999 ။ N-methyl-D-aspartate receptors vagal afferents နှင့်နျူကလိယ Tractus solitarius ၎င်းတို့၏ dendritic ပစ်မှတ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ neuroscience 91: 119- 132
3 ။ Mitchell က JL
။ 2002 ။ ကြွက်များတွင်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယအတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunits ၏ co-local ။ ဦးနှောက် Res 958: 454- 458
။ 2003 ။ ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်များ၏တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယအတွက် AMPA-လက်ခံအာရုံခံအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲများကို။ သွေးတိုး 41: 1246- 1252
1 ။ Akirav ငါ
2 ။ ရစ်ချတာ-Levin, G
။ 1999 ။ အမူအကျင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကြွက်များတွင် basolateral amygdala ဆွခြင်းဖြင့် hippocampal plasticity ၏ Biphasic မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience 19: 10530- 10535
1 ။ Alberini CM
။ 2009 ။ ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့် Synaptic plasticity အတွက်ကူးယူမှတ်တမ်းတင်အချက်များ။ Physiol ဗြာ 89: 121- 145
1 ။ Allchin R ကို,
2 ။ Batten T က,
3 ။ McWilliam P ကို,
4 ။ Vaughan P ကို
။ 1994 ။ အဆိုပါမရေ၏လျှပ်စစ်ဆွအတွက် Vivo microdialysis အားဖြင့်ကြောင်၏နျူကလိယ Tractus solitarii ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန် extracellular အချိုမှုတိုးပွားစေပါသည်။ Exp Physiol 79: 265- 268
1 ။ Andresen MC,
2 ။ ယန် MY
။ 1990 ။ non-NMDA receptors medial နျူကလိယ Tractus solitarius အတွက်အာရုံခံ afferent Synaptic ဂီယာဖျန်ဖြေ။ နံနက် J ကို Physiol 259: 1307- 1311
1 ။ Baldi အီး,
2 ။ Lorenzini, CA,
3 ။ Bucherelli ကို C
။ 2004 ။ ကြွက်များတွင် Contextual နှင့်အာရုံ-cued ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်ပြင်းထန်မှုနှင့်အထွေထွေ Footshock ။ 81- 162: Neurobiol Mem ကို 166 Learn
1 ။ Bradley MM,
2 ။ lang PJ,
3 ။ Cuthbert BN
။ 1993 ။ Emotion, အသစ်အဆန်းများနှင့်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု: လူသားတွေအတွက်လေ့။ ပြုမူနေ neuroscience 107: 970- 980
1 ။ Cahill, L,
2 ။ Alkire MT
။ 2003 ။ လူ့မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏ Epinephrine တိုးမြှင်: encoding ကမှာ arousal နှင့်အတူ Interaction ။ 79- 194: Neurobiol Mem ကို 198 Learn
2 ။ Prins B က,
3 ။ Weber က M,
4 ။ McGaugh JL
။ 1994 ။ β-Adrenergic စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရပ်များအတွက် activation နှင့်မှတ်ဉာဏ်။ သဘာဝတရား 371: 702- 704
1 ။ Carrive P ကို
။ 2000 ။ ကြွက်များတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်ကြောက်အေးစက်။ ဦးနှောက် Res 858: 440- 445
။ 2006 ။ ကြွက်များတွင်အခြေအနေတွင်မှ Conditions ကိုကွောကျရှံ့နေစဉ်အတွင်းနှလုံးစာနာခြင်းနှင့် parasympathetic အစိတ်အပိုင်းများ dual activation ။ Clin Exp Pharmacol Physiol 33: 1251- 1254
1 ။ Clayton EC,
2 ။ Williams က CL
။ 2000 ။ အဆိုပါ NTS ၏ Noradrenergic အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့တာဝန်သင်ယူခြင်းအနေနဲ့အစာစားချင်စိတ် Light-မှောင်မိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအတွက် epinephrine ၏ mnemonic သက်ရောက်မှု attenuates ။ 74- 135: Neurobiol Mem ကို 145 Learn
1 ။ Codispoti M က,
2 ။ Ferrari ပြိုင်ကား V ကို,
3 ။ Bradley MM
။ 2006 ။ ထပ်ခါထပ်ခါရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် cortical Correlate ။ ဦးနှောက် Res 1068: 213- 220
1 ။ Coupland RE,
2 ။ က Parker TL,
3 ။ Kesse wk,
4 ။ မိုဟာမက် AA ကို
။ 1989 ။ အဆိုပါ adrenal gland ၏ innervation ။ III ကို။ Vagal innervation ။ J ကို Anat 163: 173- 181
1 ။ Davis က CD ကို,
2 ။ ဂျုံးစ် FL,
3 ။ ဒါး BE
။ 2004 ။ novel ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ dentate gyrus အတွက်ရေရှည်အလားအလာများ induction နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်။ J ကို neuroscience 24: 6497- 6506
1 ။ de Boer SF,
2 ။ Slangen JL,
3 ။ ဗန် der Gugten J ကို
။ 1988 ။ ကြွက်များတွင်ရေတိုရေရှည်ထပ်ခါတလဲလဲဆူညံသံစိတ်ဖိစီးမှုမှပလာစမာ catecholamines နှင့် corticosterone တုံ့ပြန်မှုများ၏လိုက်လျောညီထွေ။ Physiol ပြုမူနေ 44: 273- 280
2 ။ Koopmans SJ,
3 ။ Slangen JL,
4 ။ ဗန် der Gugten J ကို
။ 1990 ။ plasma catecholamines, ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုမှ corticosterone နှင့်ဂလူးကို့စတုံ့ပြန်မှု: interstressor ကြားကာလအရှည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ 47: 1117- 1124
1 ။ စိန် DM,
2 ။ ပန်းခြံ CR
။ 2000 ။ Predator ထိတွေ့ retrograde သတိမေ့ခြင်းနှင့်လုပ်ကွက် Synaptic plasticity ထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါ hippocampus စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထိခိုက်မည်သို့နားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့တိုးတက်ရေးပါတီ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 911: 453- 455
2 ။ Bennett က MC,
3 ။ Stevens Ke,
4 ။ Wilson က RL,
5 ။ နှင်းဆီ GM က
။ 1990 ။ တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့သည့်ပြုမူကြွက်များတွင် hippocampal Prime ပေါကျကှဲအလားအလာများ၏ induction နှောင့်ယှက်။ Psychobiology 18: 273- 281
2 ။ Fleshner M က,
3 ။ နှင်းဆီ GM က
။ 1994 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုထပ်တလဲလဲလုပ်ကွက်ကြွက်ပြုမူအတွက် hippocampal Prime ပေါကျကှဲအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 62: 1- 9
1 ။ Dornelles တစ်ဦးက,
2 ။ က de Lima MN,
3 ။ Grazziotin M က,
4 ။ Presti-တောရက်စ် J ကို,
5 ။ Garcia က VA သို့,
6 ။ Scalco FS,
7 ။ Roesler R ကို,
8 ။ Schröder N ကို
။ 2007 ။ အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီး၏ Adrenergic တိုးမြှင့်။ 88- 137: Neurobiol Mem ကို 142 Learn
1 ။ Dorr AE,
2 ။ Debonnel, G
။ 2006 ။ serotonergic နှင့် noradrenergic ဂီယာအပေါ်မရေအာရုံကြောနှိုးဆွ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther 318: 890- 898
1 ။ Fenker DB,
2 ။ Frey Ju,
3 ။ Schuetze H ကို,
4 ။ Heipertz: D,
5 ။ Heinz HJ,
6 ။ Duzel E ကို
။ 2008 ။ novel မြင်ကွင်းများစကားများစာမျက်နှာနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ J ကို Cogn neuroscience 20: 1- 16
1 ။ Florin-Lechner သည် SM,
2 ။ Druhan JP,
3 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G,
4 ။ Valentino RJ
။ 1996 ။ အဆိုပါ locus coeruleus ၏ပေါကျကှဲဆွနှင့်အတူ prefrontal cortex အတွက် Enhanced norepinephrine လွှတ်ပေးရန်။ ဦးနှောက် Res 742: 89- 97
1 ။ Frankland PW,
2 ။ Josselyn လုပ် SA,
3 ။ Anagnostaras စင်ကာပူဒေါ်လာ,
4 ။ Kogan JH,
5 ။ Takahashi အီး,
6 ။ ဆေးလ်ဗား AJ
။ 2004 ။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် CS နှင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားပြု၏ consolidation ။ Hippocampus 14: 557- 569
1 ။ Gerra, G,
2 ။ Fertomani, G,
3 ။ Zaimovic တစ်ဦးက,
4 ။ Caccavari R ကို,
5 ။ Reali N ကို,
6 ။ Maestri: D,
7 ။ Avanzini P ကို,
8 ။ မော်နီကာက C,
9 ။ Delsignore R ကို,
10 ။ Brambilla က F
။ 1996 ။ သာမန်အမျိုးသမီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal မှ Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychobiology 33: 173- 181
1 ။ Granata AR,
2 ။ Reis DJ သမား
။ 1983a ။ reflexly vagal ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းနျူကလိယ Tractus solitarii အာရုံခံခြင်းနှင့် vasodepressor တုံ့ပြန်မှု၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၏အချိုမှုအက်ဆစ် diethyl Ester အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ EUR J ကို Pharmacol 89: 95- 102
။ 1983b ။ အဆိုပါမရေအာရုံကြောများနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ် Vivo အတွက်နျူကလိယ Tractus solitarius ၏ဧရိယာ၌ [3H] L-glutamine အက်ဆစ် (L-glu) နှင့် [3H] D-aspartic အက်ဆစ် (D-ASP) ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ ဦးနှောက် Res 259: 77- 93
1 ။ အာရှရပင် DA,
2 ။ Bowman EM,
3 ။ ဘရောင်း VJ
။ 2005 ။ အဆိုပါ anaesthetized ကြွက်များတွင်စူးရှ vagal အာရုံကြောနှိုးဆွနေစဉ်ကြွက် locus coeruleus ထံမှအသံသွင်း။ neuroscience လက်တ 379: 174- 179
1 ။ Handa RJ,
2 ။ Nunley KM,
3 ။ Lorens လုပ် SA,
4 ။ Louie JP,
5 ။ McGivern RF,
6 ။ Bollnow MR
။ 1994 ။ အသစ်အဆန်းများနှင့်ခြေလျင်ထိတ်လန့်ဖိအားကိုအောက်ပါယောက်ျားကြွက်များတွင် adrenocorticotropin နှင့် corticosterone Secret ၏အန်ဒရိုဂျင်စည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ 55: 117- 124
1 ။ Hassert DL,
2 ။ Miyashita T က,
3 ။ Williams က CL
။ 2004 ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် norepinephrine အထွက်အပေါ်တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်-ပြောင်းလဲပစ်ပြင်းထန်မှုမှာအရံ vagal အာရုံကြောနှိုးဆွမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ပြုမူနေ neuroscience 118: 79- 88
1 ။ Hermes လုပ် SA,
2 ။ Mitchell က JL,
3 ။ Silverman ကို MB,
4 ။ Lynch PJ,
5 ။ McKee BL,
6 ။ ဘေလီ TW,
7 ။ Andresen MC,
8 ။ Aicher လုပ် SA
။ 2008 ။ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်သွေးတိုးရောဂါကြွက်၏နျူကလိယ Tractus solitarii ၏ baroreceptive ဒေသများအတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunit, GluR1 ၏သိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res 1187: 125- 136
1 ။ Holdefer RN,
2 ။ Jensen RA
။ 1987 ။ ထိုအရာဝတ္ထုများအားဖြင့်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်ဂျူမှရည်ညွှန်းအတူ locus coeruleus အတွက်ထိန်းသိမ်းထားဥတုအပေါ်ရံ D-စိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများ, 4-OH စိတ်ကြွဆေးနှင့် epinephrine ။ ဦးနှောက် Res 417: 108- 117
1 ။ hui မှာ IR,
2 ။ hui GK,
3 ။ Roozendaal B က,
4 ။ McGaugh JL,
5 ။ Weinberger မိုင်
။ 2006 ။ Posttraining ကိုင်တွယ်ကြွက်များတွင်အာရုံ-cue ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အဘို့မှတ်ဉာဏ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ 86- 160: Neurobiol Mem ကို 163 Learn
1 ။ Introini-Collison ငါ
2 ။ McGaugh JL
။ 1988 ။ Post-လေ့ကျင့်ရေး epinephrine အားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်၏ Modulation: cholinergic ယန္တရားများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Psychopharmacology 94: 379- 385
2 ။ Saghafi: D,
3 ။ Novack GD,
။ 1992 ။ Post-လေ့ကျင့်ရေး dipivefrin နှင့် epinephrine ၏မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: အရံနှင့်ဗဟို adrenergic receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res 572: 81- 86
1 ။ Izquierdo LA က,
2 ။ Barros DM,
3 ။ မက်ဒီနာ JH,
4 ။ Izquierdo ငါ
။ 2000 ။ အဆိုပါ hippocampus ကွဲပြားခြားနားအဲဒီ receptor ရန်အားဖြင့် inactivated နှင့် inhibitors enzyme ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်အသစ်အဆန်း 1 သို့မဟုတ် 31 ရက်ပေါင်းလေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူတရုံးတင်စစ်ဆေးရှောင်ရှားခြင်း၏ပြန်လည်ရယူခြင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 117: 215- 220
2 ။ Viola H ကို,
3 ။ Barros DM,
4 ။ Alonso M က,
5 ။ Vianna MR,
6 ။ Furman M က,
7 ။ လေဝိသည်က de Stein က M,
8 ။ Szapiro, G,
9 ။ Rodrigues က C,
10 ။ Choi H ကို,
11 ။ et al ။
2001 ။ ကြွက် hippocampus တွင်ပါဝင်ပတ်သက် Molecular ယန္တရားများ: အသစ်အဆန်းပြန်လည်ရယူခြင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience 13: 1464- 1467
။ 2003 ။ အသစ်အဆန်းထိတွေ့ကြွက်အတွက်အလွန်ဝေးလံခေါင်သီမှတ်ဉာဏ်၏ပြန်လည်ရယူခြင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ 79- 51: Neurobiol Mem ကို 56 Learn
1 ။ Kalia M က,
2 ။ Sullivan က JM
။ 1982 ။ ကြွက်များတွင်မရေအာရုံကြော၏အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာအစိတ်အပိုင်းများစီမံချက်များ Brainstem ။ J ကို comp Neurol 211: 248- 265
1 ။ Kerfoot EC,
2 ။ Chattillion EA ၏,
။ 2008 ။ နျူကလီးယပ် Tractus solitarius (NTS) နှင့်နျူကလိယအကြား functional interaction ကအတွေ့အကြုံများကိုနှိုးဆွသောအဘို့မှတ်ဉာဏ်ပြောင်းလဲပစ်အတွက် shell ကို accumbens ။ 89- 47: Neurobiol Mem ကို 60 Learn
1 ။ ကင်မ် JJ,
2 ။ Jung မဂ္ဂါဝပ်
။ 2006 ။ Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောဆားကစ်နှင့်ယန္တရားများ: တစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ neuroscience Biobehav ဗြာ 30: 188- 202
1 ။ Kinney W က,
2 ။ Routtenberg တစ်ဦးက
။ 1993 ။ တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျဉ်းထိတွေ့သူတို့ရဲ့ DNA ကိုအသိအမှတ်ပြုမှုဒြပ်စင်မှ hippocampal ကူးယူအချက်များ၏စည်းနှောင်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res 20: 147- 152
1 ။ Kline DD
။ 2008 ။ glutamatergic NTS neurotransmission အတွက် plasticity ။ respiration Physiol Neurobiol 164: 105- 111
1 ။ Konarska M က,
2 ။ Stewart က RE,
3 ။ McCarty R ကို
။ 1989 ။ နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့အောက်ပါစာနာ-adrenal medullary တုံ့ပြန်မှုများလေ့။ Physiol ပြုမူနေ 45: 255- 261
။ 1990 ။ ဖိအားပြင်းထန်မှုသက်ရောက်မှု: နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှပလာစမာ catecholamines တုံ့ပြန်မှုများလေ့အရေးကြီးတဲ့။ Physiol ပြုမူနေ 47: 647- 652
1 ။ Korol DL,
2 ။ ရွှေ PE
။ 2008 ။ Epinephrine နိုးကြွက်များတွင်ယာယီအနေဖြင့်အကြမ်းခံပုံစံကိုမှရေရှည်အလားအလာပြောင်းပေးပါတယ်။ Hippocampus 18: 81- 91
1 ။ လောရင့် AJ,
2 ။ Watkins: D,
3 ။ Jarrott B ကို
။ 1995 ။ လူ့ယုတ်ညံ့ vagal ganglia နှင့်ကြွက်မရေအာရုံကြောတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ axon သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်β-adrenoceptor binding ဆိုဒ်များ visualization ။ J ကို Hypertens 13: 631- 635
1 ။ လီက S,
2 ။ Cullen က wk,
3 ။ Anwyl R ကို,
4 ။ Rowan MJ
။ 2003 ။ Spatial အသစ်အဆန်းမှထိတွေ့မှုအားဖြင့် hippocampal CA1 အတွက် LTP သော induction ၏ Dopamine-မှီခိုပံ့ပိုးကူညီ။ နတ် neuroscience 6: 526- 531
1 ။ Loughlin SE,
2 ။ ခြေလျင် SL,
3 ။ Bloom FE
။ 1986 ။ နျူကလိယ locus coeruleus ၏ Efferent စီမံချက်များ: သုံးဖက်မြင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးသဖြင့်သရုပ်ပြမူရင်းဆဲလ်၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဖွဲ့အစည်းက။ neuroscience 18: 291- 306
1 ။ McQuade R ကို,
2 ။ Creton: D,
3 ။ စတန်းဖို့ဒ် SC
။ 1999 ။ အတွက် Vivo microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာကြွက်အပြုအမူနှင့်ဗဟို noradrenaline function ကိုအပေါ်ဝတ္ထုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology 145: 393- 400
1 ။ Miyashita T က,
။ 2002 ။ ဆိတ်ညံသောကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယအတွက် Glutamatergic ဂီယာ amygdala noradrenergic စနစ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်မှတ်ဉာဏ် modulates ။ ပြုမူနေ neuroscience 116: 13- 21
။ 2004 ။ Peripheral arousal-related ဟော်မုန်း brainstem အရေးပါအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့် hippocampus အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန် modulate ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 153: 87- 95
။ 2006 ။ အရံβ-adrenergic receptors ၏အခန်းက္ပ: Epinephrine အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မရေအာရုံကြောတလျှောက်ရရှိစေရန်အာရုံကြော Impulses သတင်းပို့တိုးပွားစေပါသည်။ 85- 116: Neurobiol Mem ကို 124 Learn
1 ။ Moncada: D,
2 ။ Viola H ကို
။ 2007 ။ အသစ်အဆန်းမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏ induction ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်: တစ်အပြုအမူမှတ်သားခြင်းအဘို့အထောကျအထား။ J ကို neuroscience 27: 7476- 7481
1 ။ Nattel S က,
2 ။ ဖက်ဒရယ်-Elituv R ကို,
3 ။ Matthews, C,
4 ။ Nayebpour M က,
5 ။ Talajic M က
။ 1989 ။ လူတန်းစား III ၏အာရုံစူးစိုက်မှုမှီခိုနှင့်ထုံဆေးခွေးအတွက် sotalol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ခြင်းβ-adrenergic ။ J ကို Am Coll Cardiol 13: 1190- 1194
1 ။ Nordby T က,
2 ။ Torras-Garcia က M ကို,
3 ။ Portell-Cortes ငါ
4 ။ ကော်စတာ-Miserachs: D
။ 2006 ။ epinephrine ကုသမှု Posttraining ကျယ်ပြန့်လေ့ကျင့်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းလျော့နည်းစေသည်။ Physiol ပြုမူနေ 89: 718- 723
1 ။ Papa M က,
2 ။ Pellicano အမတ်,
3 ။ Welzl H ကို,
4 ။ Sadile AG က
။ 1993 ။ အသစ်အဆန်းမှ arousal နှင့်လေ့တွေနဲ့ဆက်စပ်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာက c-Fos နှင့်က c-ဇွန် immunoreactivity အတွက်ဖြန့်ဝေအပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် Res Bull 32: 509- 515
1 ။ Papa S က,
2 ။ Smith က P ကို,
3 ။ ဖာဂူဆန် AV စနစ်
။ 1990 ။ စနစ်တကျ angiotensin ကြွက်ဧရိယာ postrema အာရုံခံသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်း Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ နံနက် J ကို Physiol 258: 70- 76
1 ။ Paton JF
။ 1998a ။ မောက်အတွက်နှလုံး vagal afferents အားဖြင့် Synaptic မောင်းနှင်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် neuron ၏ convergence ဂုဏ်သတ္တိများ။ J ကို Physiol 508: 237- 252
။ 1998b ။ နှလုံး vagal သွင်းအားစုများ၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ကြွက်၏နျူကလိယ Tractus solitarii အတွက် neurokinin-1 receptors ၏အရေးပါမှု။ EUR J ကို neuroscience 10: 2261- 2275
။ 1986 ။ stereotaxic အတွက်ကြွက်ဦးနှောက် 2nd ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းနယူးယောက် ed ကိုသြဒိနိတ်
1 ။ Phillips က RG,
2 ။ LeDoux je
။ 1992 ။ amygdala နှင့် hippocampus cued ရန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ differential အလှူငွေ။ ပြုမူနေ neuroscience 106: 274- 285
1 ။ ရီကာဒိုဂျာ
2 ။ Koh သည် ET
။ 1978 ။ ကြွက်များတွင်တိုက်ရိုက်အဆိုပါ hypothalamus ဖို့တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယကနေ Project, amygdala နှင့်အခြား forebrain အဆောက်အဦများ၏ခန္ဓာဗေဒသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res 153: 1- 26
1 ။ Roozendaal B က,
2 ။ Okuda က S,
3 ။ ဗန် der ဇီး EA ၏,
။ 2006 ။ မှတ်ဉာဏ်၏ Glucocorticoid တိုးမြှင့်သည့် basolateral amygdala အတွက် arousal-သွေးဆောင် noradrenergic activation လိုအပ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 103: 6741- 6746
1 ။ Saha S က,
2 ။ Spary EJ,
3 ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးက,
4 ။ Asipu တစ်ဦးက,
5 ။ Corbett ek,
6 ။ Batten TF
။ 2004 ။ အဆိုပါကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်များတွင်တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယအတွက် AMPA အဲဒီ receptor subunits ၏တိုးလာစကားရပ်။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res 121: 37- 49
1 ။ Schreurs J ကို,
2 ။ Seelig T က,
3 ။ Schulman H ကို
။ 1986 ။ အရံအာရုံကြောအပေါ်β2-Adrenergic receptors ။ J ကို Neurochem 46: 294- 296
1 ။ Shapiro RE,
2 ။ Miselis RR
။ 1985 ။ အဆိုပါမရေအာရုံကြောများ၏ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းကြွက်များ၏အစာအိမ် innervating ။ J ကို comp Neurol 238: 473- 488
1 ။ Sheth တစ်ဦးက,
2 ။ Berretta S က,
3 ။ Lang N ကို,
4 ။ Eichenbaum H ကို
။ 2008 ။ အဆိုပါ amygdala Spatial အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်အတွက် hippocampus အတွက်အာရုံခံ activation modulates ။ Hippocampus 18: 169- 181
1 ။ Sierra-mercado: D,
2 ။ Dieguez: D, Jr,
3 ။ Barea-Rodriguez EJ
။ 2008 ။ အကျဉ်းအသစ်အဆန်းထိတွေ့အသက်ကြွက်များတွင် dentate gyrus LTP နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Hippocampus 18: 835- 843
1 ။ Sternberg DB,
2 ။ Korol: D,
။ 1986 ။ Epinephrine-သွေးဆောင်မှတ်ဉာဏ်ပံ့ပိုး: adrenoceptor ရန်အားဖြင့် attenuation ။ EUR J ကို Pharmacol 129: 189- 193
1 ။ ထူးဆန်းတဲ့ BA,
2 ။ Dolan RJ
။ 2004 ။ စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်၏β-Adrenergic မော်ဂျူလူ့ amygdala နှင့် hippocampal တုံ့ပြန်မှု evoked ။ proc Natl Acad သိပ္ပံ 101: 11454- 11458
1 ။ Straube T က,
2 ။ Korz V ကို,
3 ။ Balschun: D,
4 ။ Frey Ju
။ 2003a ။ ကြွက် dentate gyrus အတွက်အသစ်အဆန်းများက LTP-အားဖြည့်ဘို့β-adrenergic အဲဒီ receptor activation နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်၏လိုအပ်ချက်။ J ကို Physiol 552: 953- 960
3 ။ Frey Ju
။ 2003b ။ ကြွက် dentate gyrus အတွက်အသစ်အဆန်း-တူးဖော်ရေးခြင်းဖြင့်ရေရှည်အလားအလာ Bidirectional မော်ဂျူ။ neuroscience လက်တ 344: 5- 8
1 ။ Sumal KK,
2 ။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ WW,
3 ။ ယဟ TH,
4 ။ Reis DJ သမား,
5 ။ Pickel VM က
။ 1983 ။ ကြွက်နျူကလိယ Tractus solitarius အတွက် vagal afferents နှင့် catecholaminergic အာရုံခံ၏ Synaptic အပြန်အလှန်။ ဦးနှောက် Res 277: 31- 40
1 ။ Sykes RM,
2 ။ Spyer KM,
3 ။ Izzo PN
။ 1997 ။ ကြွက်၏နျူကလိယ Tractus solitarius အတွက် vagal အာရုံခံ afferents အတွက်အချိုမှု immunoreactivity ၏ဆန္ဒပြ။ ဦးနှောက် Res 762: 1- 11
1 ။ တန် AC အ,
2 ။ Reeb ဘီစီ
။ 2004 ။ မွေးကင်းစကလေးအသစ်အဆန်းထိတွေ့မှု, ဦးနှောက် asymmetry ၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်။ dev Psychobiol 44: 84- 93
1 ။ ဗန် Bockstaele EJ,
2 ။ လူမျိုးဂျေ,
3 ။ Telegan P ကို
။ 1999 ။ တစ်ဦး monosynaptic လမ်းကြောင်းများအတွက်အထောက်အထား: ကြွက်ဦးနှောက်အတွက်အနီးအနား locus coeruleus dendrites ဖို့တိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယ၏ Efferent စီမံကိန်းများ။ J ကို comp Neurol 412: 410- 428
1 ။ ဗန်တွင်း Buuse M က
။ 2002 ။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက်အသစ်အဆန်းစိတ်ဖိစီးမှုမှနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ် atropine သို့မဟုတ် atenolol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ဖိစီးမှု 5: 227- 231
1 ။ ဗန်တွင်း Buuse M က,
2 ။ ဗန် Acker လုပ် SA,
3 ။ Fluttert M က,
4 ။ de Kloet ER
။ 2001 ။ သွေးဖိအား, နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ "အသစ်အဆန်း" စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု။ Psychophysiology 38: 490- 499
1 ။ Vankov တစ်ဦးက,
2 ။ Hervé-Minvielle တစ်ဦးက,
3 ။ Sara SJ
။ 1995 ။ အသစ်အဆန်းနှင့်လွတ်လပ်စွာစူးစမ်းကြွက်၏ locus coeruleus အာရုံခံ၎င်း၏လျင်မြန်လေ့တုံ့ပြန်။ EUR J ကို neuroscience 7: 1180- 1187
1 ။ Viola H ကို,
2 ။ Furman M က,
3 ။ Izquierdo LA က,
5 ။ Barros DM,
6 ။ က de Souza ဟာ MM,
7 ။ Izquierdo ငါ
8 ။ မက်ဒီနာ JH
။ 2000 ။ အသစ်အဆန်း၏ Effect: ကြွက် hippocampus အတွက်မှတ်ဉာဏ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးမော်လီကျူးအမှတ်အသားအဖြစ် Phosphorylated စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း။ J ကို neuroscience 20: 112-
1 ။ Williams က CL,
။ 1993 ။ ဆိတ်ညံသောကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယ၏ပြောင်းပြန်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် epinephrine posttraining ၏မှတ်ဉာဏ်-ပြောင်းလဲသက်ရောက်မှု attenuate ။ ပြုမူနေ neuroscience 107: 955- 962
2 ။ အမျိုးသားများအတွက်: D,
3 ။ Clayton EC,
4 ။ ရွှေ PE
။ 1998 ။ epinephrine သို့မဟုတ် ESCAP footshock ၏စနစ်တကျဆေးထိုးပြီးနောက် amygdala အတွက် Norepinephrine လွှတ်ပေးရန်: အတိုက်ပိတ်ကျေးရွာအုပ်စုများ၏နျူကလိယပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ ပြုမူနေ neuroscience 112: 1414- 1422
87 ။ ↵
3 ။ Clayton EC
။ 2000 ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့် amygdala အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန် potentiating အတွက်နျူကလိယ Tractus solitarius ၏ noradrenergic activation ၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience 114: 1131- 1144
88 ။ ↵
1 ။ Xu L ကို,
2 ။ Anwyl R ကို,
3 ။ Rowan MJ
။ 1997 ။ အမူအကျင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟာ hippocampus အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏ induction နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သဘာဝတရား 387: 497- 500
89 ။ ↵
1 ။ Zhu XO,
2 ။ McCabe BJ,
3 ။ Aggleton JP,
4 ။ ဘရောင်းမဂ္ဂါဝပ်
။ 1997 ။ ဝတ္ထုအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ကြွက် hippocampus နှင့် perirhinal cortex ၏ differential activation ။ neuroscience လက်တ 229: 141- 143